မလေးရှားနိုင်ငံသည် ဖက်ဒရယ် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင် အာရှ တွင် တည်ရှိသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ပြည်နယ် ၁၃ ခုနှင့် ဖက်ဒရယ် နယ်မြေ ၃ ခု ပါဝင်ကာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၂၇,၇၂၀ စတုရန်းမိုင် (စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၃၃၀,၈၀၃ ကီလိုမီတာ) မျှ အကျယ်အဝန်းရှိကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော အရွယ်အစား တူညီသော နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု ရှိကာ ကျွန်းဆွယ် မလေးရှား နှင့် အရှေ့မလေးရှား (ဘော်နီယို မလေးရှား) ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်းဆွယ် မလေးရှားဒေသမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်၊ ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျှက် ရှိကာ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တို့ နှင့် ပင်လယ်ပြင် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ အရှေ့မလေးရှား မှာမူ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ နှင့် ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်၊ ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့နှင့် ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ရုံးထိုင်ရာမြို့မှာ ပူထရာဂျာရားမြို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ သန်း ၃၀ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၄၄ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ယူရေးရှားတိုက်ကြီး၏ တောင်ဘက်ဆုံး အမှတ်ဖြစ်သော တန်ဂျွန် ပီရိုင်းမှာ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရှိသည်။ ယဉ်စွန်းတန်း နှစ်ခုကြားရှိ အပူပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မက်ဂါဒိုင်ဗတ်စ် နိုင်ငံ ၁၈ နိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ပါဝင်ကာ နိုင်ငံအတွင်း တွေ့ရသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ် အများအပြား ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: နဂါရကူ
ပသျှူး (၅၀.၄%)၊ တရုတ် (၂၃.၇%)၊ တိုင်းရင်းသား (၁၁%)၊ ကုလား (၇.၁%)၊ အခြားလူမျိုးများ (၇.၈%)
အစ္စလာမ် (၆၀.၄%)၊ ဗုဒ္ဓ (၁၉.၂%)၊ ခရစ်ယာန် (၉.၁%)၊ ဟိန္ဒူ (၆.၃%)၊ တရုတ် (၂.၆%)၊ အခြားဘာသာများ (၁.၅%)၊ ဘာသာမဝင်သူများ (၀.၈%)
• ယန်းဒီ-ပဲရ်တွမ်း အာဂုံး (ဘုရင်)
အဗ္ဗဒူဟာလင်း မူအာဇမ် ရှား
• လွတ်လပ်ရေး (ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ မလေးရှား တစ်ခုတည်း)
၃၁ ဩဂုတ် ၁၉၅၇
• ဖက်ဒရေးရှင်း (ဆာဘား၊ ဆာရာဝပ် ၊ စင်ကာပူတို့နှင့် အတူ)
၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၉၆၃
၃၂၉,၈၄၇ km² (၁၂၇,၃၅၅ sq mi) (အဆင့်: ၆၇)
၂၇,၄၉၆,၀၀၀ (အဆင့် - ၄၃)
၈၃/km² (၂၁၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၁၀)
USD $ ၃၅၇.၉ သိန်းကုဋေ (အဆင့် - ၂၉)
USD $၁၄,၄၀၀ (အဆင့် - ၅၇)
အလွန်မြင့် · ၆၃
မလေးရှားရင်းဂစ် (MYR "RM")
မ​လေးရှားနိုင်ငံ၏ မူလရင်းမြစ်မှာ ထိုနေရာတွင် ရှိခဲ့သော မလေး ဘုရင် အုပ်ချုပ်ရာ ဒေသများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစုမှစ၍ ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာ လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံးသော ဗြိတိသျှ နယ်မြေများကို ရေလက်ကြား အခြေချရာ နေရာမျာဟု ခေါ်ပြီး ထိုဒေသမများ တည်ထောင်ပြီးနောက် မလေးဘုရင် အုပ်ချုပ်ရာ ဒေသများမှာ ဗြိတိသျှ တို့၏ အစောင့်အရှောက်ခံ နယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်းဆွယ် မလေးရှား ဒေသရှိ နယ်မြေများကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် မလေးပြည်ထောင်စု အဖြစ် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ မလာယာ ဒေသအား မလာယာ ဖက်ဒရေးရှင်း ဒေသ အဖြစ် ၁၉၄၈တွင် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၇ ဩဂုတ်လ ၃၁ရက် တွင် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်။ မလေးရှားသည် ဘော်နီယိုကျွန်း မြောက်ပိုင်း၊ ဆာရာဝပ်နှင့် စင်ကာပူတို့နှင့် ၁၉၆၃ စက်တင်ဘာ ၁၆တွင် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်မျှ မကြာသော အချိန် ၁၉၆၅တွင် စင်ကာပူသည် ဖက်ဒရယ် ဒေသမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် လူမျိုးစုံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုစုံ ရှိသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုအချက်မှာ နိုင်ငံရေးတွင် ကျယ်ပြန့်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ပတ်သက်လျှက် ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှ အစ္စလာမ် ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ် ကြေညာထားသော်လည်း မွတ်စလင် မဟုတ်သူများ အတွက်လည်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားသည်။ အစိုးရ စနစ်မှာ ဝက်စ်မင်စတာ ပါလီမန် စနစ်ကို နီးကပ်စွာ နမူနာ ယူထားပြီး တရားဥပဒေစနစ်မှာ ဖြတ်ထုံး စနစ်ကို အခြေခံ ထားသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအမှူးမှာ ဘုရင်ဖြစ်ပြီး "ယန် ဒီပါတွမ် အဂေါင်း" ဟု ခေါ်သည်။ ဘုရင်မှာ မလေးရှား ပြည်နယ် ကိုးခုမှ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အုပ်ချုပ်သူများထဲမှာ တစ်ဦးကို ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အဖွဲ့၏ အကြီးအမှူးမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး ရသည့် အချိန်မှစ၍ မလေးရှားသည် အာရှတွင် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေး စံချိန်တင်ခဲ့သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဂျီဒီပီမှာ နှစ်စဉ် ၆.၅% တိုးတက်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို အခြေခံ ထားသော်လည်း သိပ္ပံ၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ဆေးကုသခံမည့်သူများကို လက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းတို့သို့ တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် အခါတွင် မလေးရှားနိုင်ငံသည် လတ်တလော စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး အရှေ့တောင် အာရှတွင် တတိယ နေရာရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ် ၂၉ ရှိသည်။ အာဆီယံ အဖွဲ့၊ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအဖွဲ့၊ အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ တို့ကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့၊ ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ နှင့် ဘက်မလိုက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ၁၉၁၄ ခုနှစ် ထုတ်ဝေသော မြေပုံတွင် မလေးကျွန်းစုများကို မလေးရှားဟု အမည်တပ်ခဲ့သည်။
မလေးရှားဆိုသော အမည်မှာ မလေး ဟူသော အမည်နှင့် လက်တင်-ဂရိဘာသာတို့၏ အပိတ်စကားလုံး "ရှား" တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မလေးရှား ဘာသာမှ မလာယု ဆိုသော စကားလုံးမှာ တမီလ် ဘာသာစကား "မလိုင်" နှင့် "အာ"တို့မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး "တောင်ကုန်း" နှင့် "မြို့တော်၊ ကုန်းမြေ" ဟု အသီးသီး အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရှေးခေတ် အိန္ဒိယ ကုန်သည်များမှ မလေးကျွန်းဆွယ်အား မလာယာဒီပ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သော ရင်းမြစ်များမှ ဆင်းသက်သည် ဖြစ်စေ မဆင်းသက်သည် ဖြစ်စေ မလာယု ဆိုသော စကားလုံးမှာ အစောပိုင်း မလေး၊ ဂျာဗား ဘာသာ စကားတို့တွင် ပုံမှန် အရှိန်ရလာသည် သို့မဟုတ် ပြေးသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုစကားလုံးမှာ ဆူမတြားကျွန်းရှိ ရေစီးသန်သော မလာယု မြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအမည်အား ဆုမတြားကျွန်းပေါ်တွင် ၇ ရာစုက တည်ရှိခဲ့သော မလာယု ဘုရင်နိုင်ငံမှ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဥရောပသားတို့ ကိုလိုနီနယ်မြေ အဖြစ် သိမ်းယူခြင်း မစတင်မီက မလေးကျွန်းဆွယ်အား တာနာ မလာယု (မလေးမြေ) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျာမန် ပညာရှင် ယိုဟန် ဖရိုင်းဒရစ် ဘလူးမန်းဘတ်ချ် က တီထွင်ခဲ့သော လူမျိုး ခွဲခြားရေး စနစ်တွင် အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူများကို မလေး လူမျိုး အဖြစ် အမျိုးအစား တစ်ခုတည်းအောက်တွက် အစုဖွဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၈၂၆ ခုနှစ် ပြင်သစ် ရေကြောင်းသွားလာသူ ဂျူးလ် ဒူးမောင့် ဒါဗီးလ် ၏ အိုရှန်းနီးယား ခရီးစဉ် အပြီးတွင်မူ ၎င်းက ပထဝီ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ဆိုစိုင်ယက်တီ ဒီ ဂျီအိုဂရပ်ဖီသို့ မလေးရှား၊ မိုက်ခရိုနီးရှား နှင့် မီလန်နီးရှားဆိုသော် အခေါ်အဝေါ်များကို တင်ပြခဲ့သည်။ ထို ပစိဖိတ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကျွန်းအုပ်စုများကို လက်ရှိ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်သော ပိုလီနီးရှားမှ ခွဲခြားနိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ ဒူးမောင့် ဒါဗီးလ် က မလေးရှားကို အရှေ့အင်ဒီး တို့၏ ဒေသဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၁၈၅၀ တွင် အင်္ဂလိပ် လူမျိုးခွဲဗေဒ ပညာရှင် ဂျော့ရှ် ဆင်မြူယယ် ဝင်ဆာ အားလ်မှ အိန္ဒိယ ကျွန်းစုများနှင့် အရှေ့အာရှ ဂျာနယ်တွင် ရေးသားသော ဆောင်းပါးတွင် အရှေ့တောင် အာရှ ကျွန်းများကို မလာယုနီးရှား နှင့် အင်ဒုနီးရှား ဟု အမည်ပေးရန် တင်ပြခဲ့ပြီး ပထမ အမည်ကို ပို၍ နှစ်သက်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် အသုံးအနှုန်းတွင် မလေးဟူသော အမည်မှာ မလေးကျွန်းဆွယ် နှင့် အရှေ့တောင် အာရှရှိ အနီးအနား ကျွန်းဆွယ်များ ဖြစ်သော ဆူမတြာကျွန်း၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း၊ ဘော်နီယိုကျွန်း၏ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ထိုဒေသ နှစ်ခု ကြားတွင် တည်ရှိနေသော ကျွန်းငယ်လေးများတွင် နေထိုင်ကြသော ဩစထရိုနီးရှန်း လူမျိုးတို့၏ လူမျိုးဘာသာရေး အုပ်စု တစ်ခု၏ အမည်အဖြစ် သုံးနှုန်းကြသည်။
နိုင်ငံသည် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ ၁၉၅၇ တွင် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ပြီးနောက် မလာယာ ဖက်ဒရေးရှင်း ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး မလေးကျွန်းဆွယ်၏ အထက်ပိုင်း တွင် အေဒီ ပထမရာစုက တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းဝင် ဘုရင်နိုင်ငံအမည် လန်ကာဆူကာ စသော အမည်များကိုလည်း အမည်မပေးမီက ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိ မလာယာ ဖက်ဒရေးရှင်း နှင့် စင်ကာပူ၊ ဘော်နီယို မြောက်ပိုင်း၊ ဆာရာဝပ်တို့ ပူးပေါင်းကာ ဖက်ဒရေးရှင်း အသစ်တစ်ခု တည်ထောင်သည့် အခါတွင် မလေးရှား ဆိုသော အမည်ကို စတင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ သီအိုရီ တစ်ခု အရ စင်ကာပူ၊ ဘော်နီယို မြောက်ပိုင်း နှင့် ဆာရာဝပ်တို့ ၁၉၆၃ တွင် ပါဝင်လာသောကြောင့် စီ ဆိုသော အမည်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး သမားများက ၎င်းတို့၏ "မလေးရှား" ပြည်နယ်ကို နိုင်ငံအသစ်မှ နာမည် မပေးမီတွင် အမည်ပြောင်းလဲရန် စဉ်းစား သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၁၅ ရာစုတွင် မလက္ကာ စူလ်တန်နယ်မြေမှ မလေးကျွန်းစု တဝှမ်းတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ ပြန့်ပွားရန် အဓိက နေရာမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မလေးရှားတွင် လူသားတို့ စတင် အခြေချ နေထိုင်သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ကျော်မှ စခဲ့သည်။  မလေးကျွန်းဆွယ်တွင် ပထမဆုံး နေထိုင်သူများမှာ နီဂရစ်တို အနွယ်ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယမှ ကုန်သည်နှင့် အခြေချ နေထိုင်မည့်သူများ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်မှာ အေဒီ ၁ ရာစု ကတည်းက ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ နှင့် တတိယ ရာစုနှစ်များ အတွင်း ကုန်သွယ် ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းမြို့များကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်း ယဉ်ကျေးမှုတွင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့၏ အငွေ့အသက်များ ဖုံးလွှမ်းခြင်းကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ရပြီး မလေးကျွန်းဆွယ်ရှိ လူမျိုးများမှာ ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ကို စတင် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ သင်္သကရိုက်ဘာသာ ဖြင့် ရေးထိုးထားသော စာများကို အေဒီ ၄ ရာစု နှင့် ၅ ရာစုမှပင် စတင် တွေ့ရှိရသည်။ လန်ကာဆူကာ မင်းဆက်မှာ မလေးကျွန်းဆွယ်၏ မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ဒုတိယ ရာစုမှ ပင် စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၁၅ ရာစု ခန့် အထိ တည်ရှိခဲ့သည်။ ၇ရာစု နှင့် ၁၃ ရာစု အတွင်းတွင် မလေးကျွန်းဆွယ်၏ တောင်ပိုင်း ဒေသ အများစုမှာ ပင်လယ်ပိုင်း သီရိဝိဇယ အင်ပိုင်ယာ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ သီရိဝိဇယ အင်ပိုင်ယာ ပျက်သုဉ်းပြီးနောက်တွင် မဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာမှ မလေးကျွန်းဆွယ် ဒေသ အတော်များများနှင့် မလေးကျွန်းစုများတွင် ဩဇာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ၁၄ရာစုတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ မလေးလူမျိုးများ အကြား စတင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ၁၅ ရာစုတွင် စင်ကာပူ ဘုရင်နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာသော ဘုရင်ဖြစ်သည့် စူလ်တန် အစ်စကန်းဒါး ရှား သည် မလက်ကာ စူလတန် နယ်မြေကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်းဆွယ်ဒေသ၏ ပထမဆုံး လွတ်လပ်သော ပြည်နယ် အဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။ မလက်ကာသည် ထိုစဉ်က အရေးပါသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းမှ ကုန်သွယ်မှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၆၀၆ ခု နှစ် ဒတ်ချ်-ပေါ်တူဂီ စစ်ပွဲတွင် ဒတ်ချ်သင်္ဘောများ ပေါ်တူဂီတို့နှင့် တိုက်ခိုက်၍ မလက်ကာမြို့ ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားကြစဉ်
၁၅၁၁ ခုနှစ်တွင် မလက်ကာမြို့ကို ပေါ်တူဂီတို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဒတ်ချ်တို့မှ ၁၆၄၁ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၇၈၆ တွင် ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာသည် ကဒါ စူလ်တန်ထံမှ ပီနန်ကျွန်းကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီသို့ ငှားရမ်းခဲ့ပြီးနောက် မလာယာတွင် စတင် အခြေချခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့က စင်ကာပူအား ၁၈၁၉ တွင် ရယူခဲ့ပြီးနောက် ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဂလို-ဒတ်ချ် စာချုပ်ဖြင့် မလက်ကာအား ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ ပီနန်၊ မလက်ကာ၊ စင်ကာပူနှင့် လာဘွမ်ကျွန်းတို့ကို တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ရေလက်ကြားဒေသအား ဗြိတိသျှအစိုးရ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်သည့် ကိုလိုနီနယ်မြေ အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုသို့ ရောက်သော အခါတွင် ဗဟိုအစိုးရအောက်ရှိ မလေးပြည်နယ်များဟု သိရှိကြသော ပါဟန်း၊ စလန်ဂေါ၊ ပီရတ် နှင့် နက်ဂရီ ဆမ်ဘီလန်း ပြည်နယ်များတွင် မလေးအုပ်ချုပ်သူများကို အကြံပေးမည့် ဗြိတိသျှ လူမျိုးများကို ခန့်ထားခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်သူများမှ စာချုပ်အတိုင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်။  အခြားသော ဗဟိုအစိုးရအောက်တွင် မဟုတ်သော ပြည်နယ် ၅ ခုမှာလည်း ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် တိုက်ရိုက် ရှိမနေသော်လည်း ဗြိတိသျှ အကြံပေး အရာရှိများကို ၂၀ ရာစုတွင်း ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် တွင် လက်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်းဆွယ် ဒေသ နှင့် ဘော်နီယိုတို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာ ၁၉ ရာစု အထိ ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားထားခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ လူမျိုးတို့အား အလုပ်သမား အဖြစ် ခေါ်ယူခြင်းကို အားပေးခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်း စူလ်တန် နှင့် စူလူး စူလ်တန်တို့က ၁၈၇၇ နှင့် ၁၈၇၈ ကြားတွင် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား ဗြိတိသျှတို့အား လွှဲပြောင်းပြီးနောက်တွင် ယခု အခါတွင် ဆာဘား ဖြစ်လာမည့် ဒေသသည် ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် ဘော်နီယို မြောက်ပိုင်း ဒေသ အဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ဘရူနိုင်း စူလ်တန်မှ ဂျိမ်းစ် ဘရွတ်သို့ ဆာရာဝပ် ဒေသအား ပေးအပ်လိုက်ရပြီး ၎င်းအား ဆက်ခံသူများသည် လွတ်လပ်သော ဘုရင်နိုင်ငံ၏ အပေါ်မှ လူဖြူရာဂျာ များ အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဗြိတိသျှ အစိုးရ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီ နယ်မြေ ဖြစ်လာသည့် အချိန် အထိပင် ဖြစ်သည်။
မလေးရှားဖြစ်လာမည့် နေရာမှ ပထမဆုံး ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ပီနန်ရှိ ကွန်ဝေါလစ်ခံတပ်မှ ဖရန်စစ် လိုက်၏ ရုပ်ထု
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျပန်တပ်များမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မလာယာ၊ ဘော်နီယိုမြောက်ပိုင်း၊ ဆာရာဝပ် နှင့် စင်ကာပူတို့အား ၃ နှစ်တာမျှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် အတွင်း လူမျိုးရေး တင်းမာမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ရှင်သန်ထကြွ လာခဲ့သည်။ မလာယာအား မဟာမိတ်တပ်များမှ ပြန်လည် သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် အတွက် ထောက်ခံမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့မှ စစ်အပြီးတွင် မလာယာပြည်ထောင်စု ဟုခေါ်သည့် ဗြိတိသျှအစိုးရ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီနယ်မြေ တစ်ခု၏ အောက်တွင် မလာယာဒေသ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအား ပေါင်းစု၍ တစုတစည်းတည်းထားရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း မလေးတို့မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကန့်ကွက်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ မလေး အုပ်ချုပ်သူတို့၏ ဩဇာကို ကျဆင်းစေသည့် ကိစ္စနှင့် တရုတ်လူမျိုးတို့အား နိုင်ငံသား ပေးမည့် ကိစ္စတို့ ဖြစ်သည်။ မလာယာ ပြည်ထောင်စုကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်၍ မလေးကျွန်းဆွယ်တွင် ရှိသော စင်ကာပူမှ အပ ဗြိတိသျှတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် နယ်မြေအားလုံး ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း အလျှင်အမြန်ပင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်တွင် မလာယာ ဖက်ဒရေးရှင်း ဖြင့် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုဖက်ဒရေးရှင်းအောက်တွက် မလေးပြည်နယ်များရှိ အုပ်ချုပ်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အား ဗြိတိသျှတို့၏ အစောင့်အရှောက်ဖြင့် ပြန်လည် အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မလာယန် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် တရုတ်လူမျိုး အများစု ပါဝင်သော သူပုန်တို့သည် ဗြိတိသျှတို့အား မလာယာမှ ထွက်ခွာသွားစေရန် ပြောက်ကျားစစ်ဆင်ရေးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မလာယန် အရေးပေါ်အခြေအနေသည် ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၀ အထိ ရှိခဲ့ပြီး ပုန်ကန်ထကြွမှုများကို နှိမ်နင်းရန် ဓနသယာယ တပ်များက မလာယာတွင် အခြေချ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် မလာယာအား ဖက်ဒရေးရှင်း တစ်ခု အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် စီစဉ်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော နယ်မြေ ဖြစ်သည့် မြောက်ဘော်နီယို (ဆာဘား အဖြစ် ဝင်ရောက်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။)၊ ဆာရာဝပ် နှင့် စင်ကာပူ တို့လည်း ပါဝင်လာမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖက်ဒရေးရှင်း အဖြစ် ပေါင်းစည်းမည့် နေ့ရက်အား မလာယန် လွတ်လပ်ရေး ရသည့် နှစ်ပတ်လည် နှင့် တိုက်ဆိုက်၍ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင် စတင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၆၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အကြောင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂမှ ဦးစီးသော ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းမည့် ကိစ္စကို သဘောတူညီကြောင်း စစ်တမ်းကို ပြီးစီးစေရန် အတွက် ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းမည့် ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်သော အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှ ဆူကာနိုနှင့် ဆာရာဝပ် ပြည်သူ့ ပေါင်းစည်းရေး ပါတီ တို့၏ ကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့တွင် အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ် စင်ကာပူ ဖက်ဒရေးရှင်းမှ ခွဲထွက်သွားခြင်း နှင့် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခမှာ မေလ ၁၃ ရက် အဓိကရုဏ်းတွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။  အဓိကရုဏ်း အပြီးတွင် အငြင်းပွားစရာ အများအပြား ရှိသော စီးပွားရေး ပေါ်လစီ အသစ်ကို ဝန်ကြီးချုပ် ထွန်း အဘဒူရ် ရာဇတ် မှ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် ဘူမိပူထရတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တိုးပွားရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက် လက်ထက်တွင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှ စတင်သော စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှင့် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အလျှင်အမြန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စီးပွားရေးသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံရာမှ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အခြေခံသော စီးပွားရေး စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မက်ဂါဆင့် စီမံကိန်း အများအပြားကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပက်ထရိုးနက်စ် တာဝါ၊ တောင်-မြောက် အမြန်လမ်း၊ မာလ်တီမီဒီယာ စူပါ ကော်ရစ်ဒါ နှင့် ဖက်ဒရယ် အုပ်ချုပ်ရေး မြို့တော် အသစ်ဖြစ်သော ပူထရာဂျာရားမြို့ တို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် အာရှ စီးပွားရေးဂယက်ကြောင့် ငွေကြေးစနစ် နှင့် စတော့ ဈေးကွက်၊ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တို့ ပြိုလဲလု နီးနီး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ်၏ ရုံးအဆောက်အအုံ တည်ရှိရာ ပါဒါနာ ပူထရာ
မလေးရှားသည် စည်းမျဉ်းခံ ရွေးကောက်ခံ ဘုရင်စနစ်ရှိ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှတွင် တစ်ခုတည်းသော ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အစိုးရ စနစ်သည် ဝက်မင်စတာ ပါလီမန် စနစ်ကို အတုယူ၍ နီးကပ်စွာ ပုံဖော်ထားပြီး ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ အုပ်ချုပ်မှု၏ အမွေတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအကဲအား ယန် ဒီ-ပါတွမ် အာဂေါင်း ဟု ခေါ်ပြီး အများစု က ဘုရင်ဟုပင် ခေါ်ကြသည်။ ဘုရင်ကို မလေးပြည်နယ်များရှိ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အုပ်ချုပ်လာခဲ့သော အုပ်ချုပ်သူ ၉ ဦးထဲမှ တစ်ဦးအား ကျန်သူများမှ ၅ နှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်သည်။ အခြားအမည်ခံ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်မှူးသာ ရှိသော ပြည်နယ် ၄ ခုမှ ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။ တရားဝင် မဟုတ်သော်လည်း အားလုံးလက်ခံထားသည့် သဘောတူညီမှု အရ ထိုနေရာကို အုပ်ချုပ်သူ ၉ ဦးကြား အစဉ်လိုက် လှည့်လည်လျှက် ရှိပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ယခု အထိ ကဒါပြည်နယ် အုပ်ချုပ်သူ အဘဒူရ် ဟာလင်း မှ ဘုရင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မလေးရှား နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအား ပြုပြင်လိုက်သည်မှ စ၍ ဘုရင်၏တာဝန် အတော်များများမှာ အခမ်းအနား တက်ရုံ သာလျှင် ဖြစ်ပြီး အထက်လွှတ်တော် အမတ်များ နှင့် ဝန်ကြီးများကို ရွေးချယ်ရာတွင်သာ ပါဝင်တော့သည်။
ဥပဒေပြုရာတွင် ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော် နှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်များတွင် ဥပဒေပြုအာဏာများကို ခွဲဝေ ရယူထားသည်။ လွှတ်တော် နှစ်ရပ် ရှိသော ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် တွင် အောက်လွှတ်တော် နှင့် အထက်လွှတ်တော် ဖြစ်သော ဆီးနိတ် လွှတ်တော်တို့ ပါဝင်သည်။ အောက်လွှတ်တော် အမတ် ၂၂၂ ဦးအား တစ်ဦးချင်း ယှဉ်ပြိုင်ရသော မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုစီမှ အများဆုံး ၅ နှစ်သက်တမ်းဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြသည်။ ဆီးနိတ်လွှတ်တော် အမတ် ၇၀ ဦးမှာ ၃ နှစ် သက်တမ်းရှိပြီး ၂၆ ဦးမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၃ ခုမှ ရွေးချယ်၍ ကျန်ရှိသော ၄၄ ဦးမှာ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဘုရင်မှ ခန့်အပ်သည်။  ပါလီမန်မှာ ပါတီစုံ စနစ် ရှိပြီး အစိုးရမှာ မဲအများဆုံးရသော ပါတီက ဖွဲ့စည်းခွင့် ရှိသည့်စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးရသည့် အချိန်မှစ၍ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ညွန့်ပေါင်း ပါတီ ၁၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဘာရီဆန် နေရှင်နယ် ဟုခေါ်သည့် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ် တစ်ခုစီတွင် တစ်ခုတည်းရှိသော ပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ရှိပြီး အမတ်များအား တစ်ဦးချင်းယှဉ်ပြိုင်ရသော မဲဆန္ဒနယ်များမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသည်။ ပြည်နယ် အစိုးရအား ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဦးဆောင်ပြီး ထိုသူမှာ လွှတ်တော်ရှိ အမတ်နေရာအများဆုံး ရသော ပါတီမှ လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်သည်။ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အုပ်ချုပ်သူ ရှိသော ပြည်နယ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်သည် မလေးလူမျိုး ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်၏ အကြံပေးချက်ဖြင့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်သူမှ ခန့်အပ်ရသည်။ ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲများကို ၅ နှစ်တစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး ကျင်းပပြီး နောက်ဆုံး ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်သည်။  အသက်၂၁ နှစ် အထက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မဲဆန္ဒရှင်များသည် အောက်လွှတ်တော် အမတ် နေရာ အတွက် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ပြည်နယ် အများစုတွင် ပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ်နေရာ အတွက် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ မဲပေးခြင်းမှာ မပေးမနေရ မဟုတ်ပေ။ ဆာရာဝပ်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲမှလွဲ၍ အစဉ်အလာအရ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဖက်ဒရယ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် တစ်ချိန်တည်း တပြိုင်တည်း ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက်
အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာအား ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့သို့ အပ်နှင်းထားသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်မှာ အောက်လွှတ်တော်၏ အမတ် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဘုရင်၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူက ပါလီမန်ကို အုပ်ချုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အဖွဲ့အား လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးရှိ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ ထဲမှ ခန့်အပ်ရသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရုံသာမက အစိုးရ တစ်ခုလုံး၏ ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်သည်။  လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်မဟာသီယာ မိုဟာမက်မှာ ၇ယောက်မြောက် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမှာ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ဖြတ်ထုံးဥပဒေ အပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ တရားစီရင်ရေး စနစ်သည် သီအိုရီ အရ လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏ လွတ်လပ်မှုမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပြီး တရားသူကြီးများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကင်းမဲ့သည်။  တရားစီရင်ရေး စနစ်တွင် အမြင့်ဆုံး တရားရုံးမှာ ဖက်ဒရယ် တရားရုံးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အောက်တွင် အယူခံ တရားရုံးနှင့် တရားလွှတ်တော် ၂ ခု ရှိကာ တစ်ခုမှာ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ် အတွက် ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ခုမှာ အရှေ့မလေးရှား အတွက် ဖြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် တော်ဝင်မိသားစုမှ စွဲဆိုသော ပြစ်မှုများနှင့် တော်ဝင်မိသားစုသို့ စွဲဆိုသော ပြစ်မှုများကို ကြားနာရန် အထူး တရားရုံးတစ်ခု ရှိသည်။ လူသတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု များ အတွက် သေဒဏ် အပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ တရာရုံးများနှင့် အပြိုင်ရှိနေသည်မှာ ရှာရီယာ တရားရုံးများ ဖြစ်ပြီး ထိုတရားရုံးများမှ မွတ်စလင်များအား ရှာရီယာ ဥပဒေဖြင့် စီရင်လေ့ ရှိကာ မိသားစု အရေး နှင့် ဘာသာရေး ကိစ္စရပ်များ အတွက် ဖြစ်သည်။
လူမျိုးရေးသည် နိုင်ငံရေးတွင် အဓိက အားတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီ အများစုမှာ လူမျိုးပေါ်တွင် အခြေခံကြသည်။ စီးပွားရေး ပေါ်လစီ အသစ် နှင့် ၎င်းအား အစားထိုးသော အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပေါ်လစီ အစရှိသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ မလေးရှား၏ အစပထမ နေထိုင်သူများဟု ယူဆသော ဘူမိပူထရ ဟုခေါ်သော မလေး နှင့် ရှေးဦးနေ လူမျိုးများ၏ ရပ်တည်မှုအား ဘူမိပူထရ မဟုတ်သည့် မလေးတရုတ် လူမျိုးများ နှင့် မလေးကုလား လူမျိုးများထက် ရှေ့ရောက်စေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုပေါ်လစီများမှ ဘူမိပူထရ များအား အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေး၊ ပညာသင်ဆု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်များကို သက်သာစွာ ရရှိ နေထိုင်နိုင်ရေး နှင့် အထောက်အပံ့ပေးထားသော စုဆောင်းမှု စသည်တို့တွင် ဦးစားပေး အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအကြောင်းကြောင့် လူမျိုး အချင်းချင်း ကြားတွင် မကျေနပ်မှုများ ပိုမို တိုးပွား လာခဲ့သည်။ မလေးရှားတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ငြင်းခုံမှုမှာ မလေးရှား ဥပဒေ နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဘာသာရေး လုံးဝ မနွယ်ဘဲ ရှိသင့်သည် သို့မဟုတ် အစ္စလာမ် စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင် မူတည်သင့်သည် ဆိုသော ကိစ္စရပ် ဖြစ်သည်။ ပင်န်မလေးရှားအစ္စလာမ် ပါတီမှ မလေးအမျိုးသား စည်းလုံးရေး အဖွဲ့ (ယူအမ်အင်န်အို) ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ကလန်တန် ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းလာသော အစ္စလာမ် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှ ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး အကြောင်းပြချက်မှာ ရာဇဝတ်မှု ဥပဒေများသည် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သောကြောင့် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
နာဂျစ်ရာဇက်အား ဗလာဒီမီယာ ပူတင် နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
မလေးရှားသည် အာဆီယံ အဖွဲ့ နှင့် အစ္စလာမ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (အိုအိုင်စီ) တို့အား စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၊ အာရှ-ပစိဖိတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ၈ နိုင်ငံ  နှင့် ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့စသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း အများအပြားတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။ မလေးရှားသည် အာဆီယံ၊ အိုအိုင်စီ နှင့် ဘက်မလိုက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တို့၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ယခင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသဖြင့် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့တွင်လည်း ပါဝင်သည်။ ကွာလာလမ်ပူမြို့သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အရှေ့အာရှ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးပွဲကို လက်ခံကျင်းပရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီမှာ ကြားနေဝါဒ အပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး နိုင်ငံအားလုံးအား မည်သည့်နိုင်ငံရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည် ဖြစ်စေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အစိုးရသည် အရှေ့တောင် အာရှ လုံခြုံရေး နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အဓိက အရေးအကြီးဆုံး အချက် အဖြစ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပြီး ဒေသအတွင်း အခြားသော နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်သည်။ သမိုင်းကြောင်း အရ ပြန်ကြည့်မည် ဆိုလျှင် အစိုးရမှ မလေးရှားနိုင်ငံအား တိုးတက်သော အစ္စလာမ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ပုံဖော်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ နှင့် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာလာစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မလေးရှား ပေါ်လစီ၏ ပြင်းထန်သော သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမှာ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်မြဲရေး နှင့် ပြည်တွင်းကိစ္စရပ်များတွင် မိမိဘာသာ ထိန်းချုပ်မှု ရနိုင်စေရေးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
နယ်မြေရေးရာ အငြင်းပွားမှု ပြဿနာများအတွက် အစိုးရမှ ဖြေရှင်းသည့် ပေါ်လစီမှာ လက်တွေ့ဝါဒ အပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး အငြင်းပွားမှုများကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြေရှင်းလေ့ရှိကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှ ဖြေရှင်းခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စပရက်ထလီ ကျွန်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေသအတွင်း နိုင်ငံအများအပြားကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်၏ နေရာ အများစုကို တရုတ်မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ မလေးရှား၏ အိမ်နီးချင်းများ ဖြစ်ကြသော ဗီယက်နမ် နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့ကဲ့သို့ တရုတ်နှင့် အငြင်းပွားမှုကို မလေးရှားမှ ရှောင်ရှားခဲ့သည်ကို သမိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း တရုတ်သင်္ဘောများ မလေးရှား ရေပိုင်နက်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်  မလေးရှားသည် တရုတ်ကို ရှုံ့ချရာတွင် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်း နှင့် မလေးရှားတို့သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်ဦး၏ နယ်မြေအား အခြားတစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တောင်းဆိုခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန် ကြေငြာခဲ့ပြီး ရေပိုက်နက် နယ်နိမိတ်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင် အနေနှင့် ငုပ်လျှိုးနေသော ဆာဘား အရှေ့ပိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တောင်းဆိုမှု ရှိသည်။ စင်ကာပူမှ ပင်လယ်ကို ရေဖို့၍ ကုန်းမြေများ တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် တင်းမာမှုကို ပိုမိုတိုးပွား လာစေခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား နှင့်လည်း ရေပိုင်နက် နှင့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုတို့ အနည်းငယ်မျှ ရှိသည်။
မလေးရှား စစ်တပ်၏ လက်နက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ (ထိပ်ဆုံး ယာဘက်မှ လက်ယာရစ်) စကော့ပီနဲ ကလပ်စ် ရေငုပ်သင်္ဘော၊ ပီတီ-၉၁အမ် အမ်ဘီတီ တင့်ကား၊ မလေးရှားကြည်းတပ် လေထီးတပ်သား တစ်ဦးအား အမ်-၄ သေနတ်ဖြင့် တွေ့ရပုံ၊အက်စ်ယူ-၃၀ အမ်ကေအမ် တိုက်လေယာဉ်
မလေးရှားသည် အစ္စရေးနိုင်ငံအား မည်သည့်အခါကမျှ အသိအမှတ် မပြုခဲ့သည့် အပြင် သံတမန် ဆက်ဆံရေးလည်း မရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် တရားရုံးအား အစ္စရေးတို့မှ ဂါဇာဖလော်တီလာ စီးနင်းမှု အတွက် အရေးယူရန် တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။ မလေးရှား အနေနှင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးမှာသာ အစ္စရေးနိုင်ငံ နှင့် တရားဝင် ဆက်ဆံရေး ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံးအား အဖြေကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ မလေးရှား ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များသည် ကွန်ဂို၊ အီရန်-အီရတ်၊ နမီးဘီးယား၊ ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ဆိုမာလီယာ၊ အရှေ့တီမော နှင့် လက်ဘနွန် အစရှိသော ကုလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး အထူးတာဝန် အများအပြားတွင် ပါဝင် ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ဖူးသည်။
မလေးရှား စစ်တပ်တွင် အခွဲ ၃ ခု ရှိပြီး တော်ဝင် မလေးရှား ရေတပ်၊ မလေးရှား ကြည်းတပ်နှင့် တော်ဝင် မလေးရှား လေတပ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ စစ်မှုမထမ်းမနေရ အမိန့် မရှိဘဲ စစ်တပ်သို့ မိမိဆန္ဒဖြင့် ဝင်ရောက်လိုပါက အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံ ဂျီဒီပီ၏ ၁.၅% ကို သုံးစွဲပြီး လူအင်အား၏ ၁.၂၃% ကို အသုံးချထားသည်။
အင်အားရှိ နိုင်ငံ ၅ ခု ၏ ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်မှာ ဒေသအတွင်း လုံခြုံရေးအတွက် ပဏာမ ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နှစ် ၄၀ နီးပါးခန့် သက်တမ်း ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် နှင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းတို့ ပူးပေါင်း၍ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဘရူနိုင်း၊တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှား နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့နှင့်လည်း ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများ စစ်ရေးဗျူဟာ စမ်းသပ်မှုများကို တွဲဖက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ် တို့အနေနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ပင်လယ်ရေပိုင်နက်အား လုံခြုံစေပြီး တရားမဝင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှု၊ ပင်လယ်ဓားပြမှု၊ မှောင်ခိုမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သဘောတူ ထားသည်။ မွတ်စလင် ဒေသဖြစ်သော ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတို့တွင် တွင် အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မလေးရှားသို့ လျှံထွက် ရောက်ရှိလာမည်ကို စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေကြသည်။
မလေးရှားသည် ပြည်နယ် ၁၃ ခုနှင့် ဖက်ဒရယ် နယ်မြေ ၃ ခု ပါဝင်သော ဖက်ဒရေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဒေသ ၂ ခု ခွဲထားပြီး ပြည်နယ် ၁၁ ခုနှင့် ဖက်ဒရယ်နယ်မြေ ၂ ခုမှာ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် ရှိပြီး အခြား ပြည်နယ် ၂ ခုနှင့် ဖက်ဒရယ် ဒေသ တစ်ခုမှာ အရှေ့မလေးရှားတွင် ရှိသည်။ ပြည်နယ်များကို ခရိုင်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားပြီး ခရိုင်များကို မူကင်မ်ဟုခေါ်သော ဒေသ များ အဖြစ် ထပ်မံ ပိုင်းခြားထားသည်။ ဆာဘားနှင့် ဆာရာဝပ်တွင်မူ ခရိုင်များကို တိုင်းများ အဖြစ် ပေါင်းစည်းထားသည်။
ပြည်နယ်များ အတွက် အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စများကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရ နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများ မျှဝေထားပြီး ၎င်းတို့တွင် ကွဲပြားခြားနားသော ဩဇာအာဏာ အသီးသီးရှိသည်။ ဖက်ဒရယ် နယ်မြေများ အတွက်မူ ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်။ အောက်ပိုင်းမှ အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်များမှ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မြို့တော် ကောင်စီ၊ ခရိုင်ကောင်စီ၊ မြူနီစီပါယ် ကောင်စီ စသည်တို့ ပါဝင်ကာ အချို့သော ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အတွက် ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းများကို ဖက်ဒရယ် အစိုးရနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ တို့မှ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ ဖက်ဒရယ် နယ်မြေ ပြင်ပရှိ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များသည် ပြည်နယ် အစိုးရ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်သာ ရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှ ပြည်နယ် အစိုးရ၏ ကိစ္စရပ်များကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများ ရှိသည်။ ဒေသခံ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ၁၄၄ ခု ရှိပြီး မြို့တော်ကောင်စီ ၁၁ခု၊ မြူနီစီပါယ်ကောင်စီ ၃၃၃ ခုနှင့် ခရိုင်ကောင်စီ ၉၇ ခု တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ပြည်နယ် ၁၃ ခုမှာ သမိုင်းတွင် ရှိခဲ့သော မလေး ဘုရင်နိုင်ငံ ၁၃ ခုပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ ပြည်နယ် ၁၁ ခု ထဲမှ မလေးပြည်နယ်များဟု သိကြသော ၉ ခုသည် တော်ဝင်မိသားစုကို ဆက်လက် လက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဘုရင်အား ထို အုပ်ချုပ်သူ ၉ဦးထဲမှ တစ်ဦးအား ကျန်သူများမှ ၅ နှစ် သက်တမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ်ကြသည်။  ဘုရင်မှ အုပ်ချုပ်သူ ကင်းမဲ့သွားသော ပြည်နယ်အား အုပ်ချုပ်ရန် အတွက် ၄ နှစ် သက်တမ်း ရှိသော ဘုရင်ခံအား ထိုပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးနောက် ခန့်အပ်လေ့ ရှိသည်။ ပြည်နယ် တစ်ခုချင်းစီတွင် တစ်ခုတည်းရှိသော ဥပဒေပြု လွှတ်တော် တစ်ခု နှင့် ကိုယ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရှိသည်။ ဆာဘား နှင့် ဆာရာဝပ်တို့တွင် အခြား ပြည်နယ်များထက် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုရှိပြီး သီးခြား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ပေါ်လစီ နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့အပြင် သီးသန့် နေထိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်တို့မှာ ထူးခြားချက်များ ဖြစ်ကြသည်။. ပြည်နယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ဖက်ဒရယ် အဆင့်မှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ ရေနံအတွက် အခွန်ဆောင်ရခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော အငြင်းပွားမှုများ စသည့်တို့ကြောင့် မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် ဂျဟိုး၊ ကလန်တန်၊ ဆာဘား နှင့် ဆာရာဝပ် အစရှိသော ပြည်နယ်များ၏ ခေါင်းဆောင်များမှ ခွဲထွက်မည်ဟု ကြေငြာလေ့ ရှိသော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ဆောင်ရွက်ချက်များ မရှိသလို လွတ်လပ်ရေး အတွက် အမှန်တကယ် လှုပ်ရှားမျိုးလည်း မရှိပေ။
မလေးရှားသည် အီကွေတာ ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး အပူပိုင်း မိုးသစ်တော ရာသီဥတု တစ်နှစ်လုံး ရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စုစုပေါင်း ကုန်းမြေ ဧရိယာ အားဖြင့် ၆၆ ခုမြောက် အကြီးဆုံးသော နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း မြေဧရိယာ အားဖြင့် ၁၂၇,၂၆၄ စတုရန်းမိုင် (၃၂၉,၆၁၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ အနောက်မလေးရှားတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက် ရှိပြီး အရှေ့မလေးရှားတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ တို့နှင့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ နှင့် ကျဉ်းမြောင်းသော တာရိုးလမ်း တစ်ခု နှင့် တံတားဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တို့နှင့် ပင်လယ် ရေပိုင်နက်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။. ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်များမှာ ပါလစ်မြစ်၊ ဂိုလော့မြစ် နှင့် ပဂါလာယန် တူးမြောင်း အစရှိသော ကြီးမားသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ပိုင်းခြားထားသော်လည်း ပင်လယ်ရေပိုင်နက် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အချေအတင် ငြင်းခုံဆဲပင် ဖြစ်သည်။. ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသည် မလေးရှားနိုင်ငံ အတွင်း နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် ဖြစ်လုနီးပါး တည်ရှိပြီး ဆာရာဝပ် ပြည်နယ်မှ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံအား နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားသည်။ မလေးရှားသည် အာရှကုန်းမကြီး နှင့် မလေးကျွန်းစုများ ပေါ်တွင် နယ်နိမိတ် ရှိသော တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်ပိုင်း ဂျဟိုးပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော တန်ဂျွန် ပီရိုင်းမှာ အာရှတိုက်၏ တောင်ဘက် အစွန်ဆုံး ထိပ်စွန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စူမားတြားကျွန်းနှင့် မလေးကျွန်းဆွယ် ကြားတွင် တည်ရှိသော မလက်ကာ ရေလက်ကြားမှာ ကမ္ဘာ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဖြတ်သန်း သွားလာလျှက် ရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခုကို တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ ပိုင်းခြားထားပြီး ကျွန်းဆွယ် မလေးရှားနှင့် အရှေ့မလေးရှားဒေသတို့သည် အလွန်တူညီသော ရှုခင်းများ ရှိကြကာ ကမ်းရိုးတန်း လွင်ပြင်များမှ တောင်ကုန်းများ တောင်တန်းများသို့ မြင့်တက်သွားသည့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မျိုး ရှိသည်။ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်တွင် မလေးရှား ကုန်းမြေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ၌ပါဝင်ပြီး  မြောက်မှ တောင်သို့ ၄၃၀မိုင် (၇၄၀ ကီလိုမီတာ) မျှ သွယ်တန်းလျှက် ရှိကာ အကျယ်ဆုံးနေရာတွင် ၂၀၀မိုင် (၃၂၂ ကီလိုမီတာ)မျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းကြားတွင် တီတီဝန်ဆာ တောင်ကုန်းများဖြင့် ပိုင်းခြား ထားပြီး အမြင့်ဆုံး နေရာဖြစ်သော ကော်ဗူတောင်တွင် ၇,၁၆၂ပေ( ၂,၁၈၃ မီတာ) မျှ မြင့်တက်သွားကာ တောင်ကုန်းများ၏ တစ်စိတ်တပိုင်းမှာ ကျွန်းဆွယ်၏ အလယ်ပိုင်းသို့ သွယ်တန်း ဆင်းသက် သွားကြသည်။ တောင်ကုန်းများမှာ သစ်တောများ ထူထပ်စွာ ရှိကြပြီး ဂရက်နိုက် များနှင့် အခြား မီးသင့်ကျောက်များဖြင့် အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အများစုမှာ တိုက်စားခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်သဖြင့် ကာ့စ် ကုန်းမြေပြင် အသွင် ဖြစ်နေကြသည်။ ထိုတောင်ကုန်းများသည် မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်ရှိ မြစ်များ၏ မြစ်ဖျားခံရာ ဒေသဖြစ်သည်။ ကျွန်းဆွယ်ကို ဝန်းရံထားသော ကမ်းရိုးတမ်း လွင်ပြင်တွင် အကျယ်ဆုံး နေရာ၌ ၃၁ မိုင် (၅၀ ကီလိုမီတာ) ရှိ၍ ကျွန်းဆွယ် ကမ်းရိုးတန်း အရှည်မှာ ၁,၂၀၀မိုင် (၁,၉၃၁ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော်လည်း သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းများမှာ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် သာ ရှိသည်။
ဂူနန် မူလူး အမျိုးသား ဥယျာဉ်ရှိ အာပီတောင်ပေါ်မှ ထုံးကျောက် အချွန်အတက်များ
ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်ရှိ အရှေ့မလေးရှားတွင် ကမ်းရိုးတန်း အရှည်အားဖြင့် ၁,၆၂၀မိုင် (၂,၆၀၇ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသည်။ ထိုဒေသအား ကမ်းရိုးတန်း ဒေသသ၊ တောင်ကုန်းနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ တောင်ကုန်း ထူထပ်သော အတွင်းပိုင်း ဟူ၍ ပိုင်းခြား ထားသည်။ ခရော့ကာ တောင်တန်းများသည် ဆာရာဝပ်မှ မြောက်ဘက်သို့ သွယ်တန်းသွားပြီး ဆာဘားပြည်နယ် နှင့် နယ်နိမိတ် အဖြစ် တည်ရှိသည်။ ထိုဒေသမှာ ၁၃,၄၃၅ ပေ (၄,၀၉၅ မီတာ) မြင့်သော ကင်နာဘာလူးတောင် တည်ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး မလေးရှား၏ အမြင့်ဆုံးတောင်လည်း ဖြစ်သည်။ ကင်နာဘာလူးတောင်သည် ကင်နာဘာလူး အမျိုးသား ဥယျာဉ် အတွင်း တည်ရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ အမွေခံ နေရာ ၄ ခု တွင် တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော ဒေသဖြစ်သည်။ ဆာရာဝပ်တွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဂူ ဖြစ်သော မူလူးဂူများ ရှိကာ ကမ္ဘာ့အမွေခံ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သော ဂူနန်မူလူး အမျိုးသား ဥယျာဉ် အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။
မလေးရှား၏ အပိုင်း ၂ ပိုင်း ကြားထဲတွင် ကျွန်း အများအပြား ရှိပြီး အကြီးဆုံး ကျွန်းမှာ ဘန်ဂီကျွန်းများ ဖြစ်သည်။ ဒေသ၏ ရာသီဥတုမှာ အီကွေတာ ရာသီဥတုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလ အတွင်း အနောက်တောင် အရပ်မှ ၊ အောက်တိုဘာမှ ဖေဖော်ဝါရီ အတွင်း အရှေ့မြောက် အရပ်မှ မုတ်သုံလေများ တိုက်ခတ်သည်။ ဝန်းရံထားသော သမုဒ္ဒရာများကြောင့် အပူချိန်မှာ သင့်တင့်မျှတသည်။ စိုထိုင်းဆမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားပြီး နှစ်စဉ် မိုးရေချိန်မှာ ၉၈ လက်မ (၂၅၀ စင်တီမီတာ) မျှ ရှိသည်။ ကျွန်းဆွယ် ဒေသ နှင့် အရှေ့မလေးရှားတို့တွင် ရာသီဥတုမှာ ကွာခြားပြီး ကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ ရာသီဥတုမှာ ကုန်းမကြီးမှ လေတိုက်ခတ်မှုများမှ တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိကာ ၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ အရှေ့ပိုင်းတွင်မူ ပင်လယ်ပြင်နှင့်ပိုမို နီးစပ်သော ရာသီဥတုမျိုး ရှိသည်။ နိုင်ငံတွင်း ရာသီဥတုကို ဒေသ ၃ ခု ခွဲခြားနိုင်ပြီး ကုန်းမြင့်ပိုင်း၊ မြေနိမ့်ပိုင်း နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရာသီဥတုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းမှ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့် နှင့် မိုးရွာကျမှုတို့ကို သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပြီး ရေကြီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုမို များပြားလာကာ ထို့အတွက်ကြောင့် မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းနှင့် ကြုံရနိုင်သည့် အလားအလာ ရှိသည်။
မလေးရှား ဒေသခံ မျိုးရင်း တိရစ္ဆာန်များ (အပေါ်ယာမှ လက်ယာရစ်): အိုရီယန်တယ်ပိုင် အောက်ချင်းငှက်၊ ဟော့ခ်စ်ဘီလ် ပင်လယ်လိပ်၊ နှာမောင်းမျောက် ၊ မလာယန် ကျား
မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မျိုးကွဲများ နှင့် ပတ်သက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ်ရေထိုးခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခု ဇွန်လ ၂၄ ရက်မှ စ၍ စာချုပ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးကွဲများ ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ညီလာခံတွင် ၁၉၉၈ ခု ဧပြီလ ၁၆ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံသည် မက်ဂါ အဆင့်ရှိအောင် အလွန်အမင်း ကွဲပြားခြားနာမှုများ ရှိပြီး မျိုးစိတ်များ အမြောက်အများ ရှိသကဲ့သို့ ဒေသအတွင်း၌ သာတွေ့ရသော မျိုးစိတ်များလည်း အလွန်များပြားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ဒေသအတွင်း၌ သာ တွေ့ရသော မျိုးစိတ်များကို ဘော်နီယိုကျွန်း တောင်ကုန်းများရှိ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသော သစ်တောများတွင် တွေ့ရပြီး မျိုးစိတ် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအား မြေနိမ့်ပိုင်း သစ်တောများဖြင့် သီးသန့် ပိုင်းခြားထားသည့် ပမာ ဖြစ်နေသည်။ နိုင်ငံ အတွင်း နို့တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၁၀ ခန့်မျှ ရှိသည်။ ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆၂၀ ကျော်ကိုလည်း မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အများစုမှာ ထိုဒေသရှိ တောင်ကုန်းများ၌သာ တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် မလေးရှား ဘော်နီယို တွင်လည်း ထိုဒေသတွင်သာ တွေ့ရသော ငှက်မျိုးစိတ် အမြောက်အများ ရှိသည်။  တွားသွားသတ္တဝါ မျိုးစိတ် ၂၅၀ ကျော်ကို တွေ့ရပြီး မျိုးစိတ် ၁၅၀ ကျော်မှာ မြွေမျိုးစိတ်များ ဖြစ်ကြပြီး ၈၀ ကျော်မှာ ပုတ်သင်ညိုနှင့် ဖွတ်ကဲ့သို့ မျိုးစိတ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဖားမျိုးစိတ် ၁၅၀ ခန့် ရှိပြီး ပိုးမွှားမျိုးစိတ် ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ မလေးရှား၏ သီးသန့် စီးပွားရေး ဇုံမှာ ကုန်းမြေ ဧရိယာထက် ၁ဆခွဲမျှ ပိုမို ကျယ်ဝန်းပြီး ၎င်း၏ အချို့သော ရေ နေရာများမှာ ဇီဝမျိုးကွဲများအတွက် ထင်ရှားသော နေရာ ဖြစ်သည့် သန္တာတြိဂံ ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။  ဆီပါဒန်ကျွန်း အနီးရှိ ရေမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဇီဝမျိုးကွဲ အစုံဆုံး ရေနေရာ ဖြစ်သည်။ အရှေ့မလေးရှားနှင့် နယ်နိမိတ်ဖြစ်သော ဆူလူးပင်လယ်မှာ ဇီဝမျိုးကွဲများ အတွက် ထင်ရှားသော နေရာ ဖြစ်ပြီး သန္တာမျိုးစိတ် ၆၀၀ ခန့် နှင့် ငါးမျိုးစိတ် ၁၂၀၀ ခန့် ရှိသည်။ မလေးရှား ကျောက်ဂူများ၏ ထူးခြားသော ဇီဝမျိုးကွဲပုံမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ဂေဟကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကို အမြဲပင် စွဲဆောင်လျှက် ရှိသည်။
မလေးရှားတွင် မှိုမျိုးစိတ်ပေါင်း ၄,၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး သစ်ကပ်မှော် ဖြစ်ပွားစေသော မျိုးစိတ်များလည်း ပါဝင်သည်။ မလေးရှားရှိ မျိုးစိတ် အမြောက်အများရှိသော မှိုအစုအဝေး နှစ်ခုတွင် အက်စ်ကိုမိုင်ကိုတာ နှင့် ၎င်းတို့၏ လိင်မဲ့အခြေအနေအား အချို့သော တည်ရှိရာ နေရာ (သစ်ဆွေးများ၊ ပင်လယ်နှင့် ရေချို ဂေဟစနစ်များ တွင် အချို့အပင်များ၏ ကပ်ပါးများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဇီဝအားဖြင့် ဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုတွင် အထောက်အကူ ပေးသော ပစ္စည်းများ အဖြစ်လည်းကောင်း) တို့တွင် ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး အခြားသော တည်ရှိရာ နေရာများ (အတွင်းကပ်ပါးများ အဖြစ် မြေကြီးထဲတွင် လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန် အညစ်အကြေးများတွင် လည်းကောင်း၊ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့တွင် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ အဖြစ်လည်းကောင်း) တွင်မူ ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း မပြုရသေးပေ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာလျှင် ပြုရသေးသည်။ ဘာစီဒီယို မိုင်ကိုတာ တို့ကိုမူ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာလျှင် လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ဘရက်ကက်မှိုများတွင် လည်းကောင်း၊ မှိုပွင့်များ နှင့် တုတ်ဒ်စတူးလ်များတွင် လည်းကောင်း လေ့လာခဲ့ပြီး မလေးရှား ရပ်စ် နှင့် စမတ် မှိုများ အကြောင်းကိုမူ အလွန်ပင် နည်းပါးစွာ သိရှိသေးသည်။ မလေးရှားရှိ မှို မျိုးစိတ် အမြောက်အများကို မှတ်တမ်းတင်ရခြင်း မရှိသေး ဆိုသည့် အချက်မှာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိပေ။ အသစ် ထပ်မံ တွေ့ရှိမည့် မှိုများသည် သိပ္ပံပညာအတွက် အသစ်ဖြစ်မည်ဟု မှန်းဆ နိုင်ပေသည်။ 
အချို့သော ရပ်ဖဲလ်ရှား မျိုးစိတ်များသည် ၃.၃ပေ (၁မီတာ) ခန့် အချင်းမျှ အပွင့်ပွင့် ကြသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော ပန်းပွင့် ဖြစ်သည်။
မလေးရှား၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်မှာ သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျှက် ရှိပြီး  အချို့သော သစ်တောများမှာ နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၃၀ ကျော်မျှ သက်တမ်း ရှိပြီ ဖြစ်သည်။  သစ်တောများတွင် အင်-ကညင်မျိုး အပင်များ အများဆုံး ပေါက်ရောက်လျှက် ရှိသည်။ မြေနိမ့်သစ်တောများသည် ပေ ၂,၄၉၀ (၇၆၀ မီတာ) အောက် ဒေသများကို ဖုံးလွှမ်းထားပြီး  ယခင်က မလေးရှား အရှေ့ပိုင်းကို ထိုသို့သော သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားကာ ၎င်းတို့ကို ပူနွေးစွတ်စိုသော ရာသီဥတုက အထောက်အပံ့ ပေးထားသည်။ အပွင့်ပွင့်သော ပန်းပင် နှင့် သစ်ပင် မျိုးစိတ် ၁၄,၅၀၀ ခန့် ရှိသည်။ မိုးသစ်တောများအပြင် ၅၅၀ စတုရန်းမိုင် (၁,၄၂၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျော် ကျယ်ဝန်းသော လမုတောများလည်း မလေးရှားတွင် ရှိပြီး သစ်ဆွေးတောများလည်း အများအပြား ရှိသည်။ အမြင့်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဝက်သစ်ချပင်များ၊ သစ်အယ်ပင်များ နှင့် တောင်ဇလပ်ပင်များက အင်ကညင်တို့ နေရာတွင် အစားထိုး ပေါက်ရောက်ကြသည်။  မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်တွင် ဗက်စကျူလာ အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၈,၅၀၀ ခန့်ရှိပြီး အရှေ့ မလေးရှားတွင် ၁၅,၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။  အရှေ့မလေးရှားရှိ သစ်တောများတွင် သစ်ပင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဇီဝမျိုးကွဲ အစုံဆုံး ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်ကာ တစ်ဟက်တာ အကျယ်အဝန်းတိုင်းတွင် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၄၀ မျှ ရှိသည်။  ထိုသစ်တောများတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပန်းပွင့်များ ဖြစ်သော ရပ်ဖဲလ်ရှား မျိုးစုဝင် အများအပြားကို တွေ့ရပြီး အကြီးဆုံး အချင်းမှာ ၃.၃ပေ (၁ မီတာ) မျှ ဖြစ်သည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးများကြောင် သစ်ပင်ဖုံးလွှမ်းမှုကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေပြီး နိုင်ငံအတွင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုကို ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆာရာဝပ်ရှိ မိုးသစ်တောများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြုန်းတီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ အရှေ့မလေးရှားတွင် သစ်ပင်များ မရှိတော့၍ ရေကြီးမှုများ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်မူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသော သစ်တောများအား ပြုန်းတီးပြီး ဖြစ်သည် ယခု လက်ရှိ သစ်တော ပြုန်းတီးမှုနှုန်း အရ သစ်တောများသည် ၂၀၂၀ တွင် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ယူဆရသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းမှာ တိရစ္ဆာန်များ၊ မှိုများ နှင့် အပင်များ အတွက် အဓိက ပြဿနာပင် ဖြစ်ပြီး သစ်တောများအား စိုက်ပျိုးမြေများ အတွက် ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိနေသော သစ်တောများကို အမျိုးသား ဥယျာဉ်များ အတွင်း တွေ့ရသည်။  နေထိုင်ရာ ဒေသ ပျက်စီးခြင်းသည် ပင်လယ်ရေနေ သတ္တဝါများ အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခု ပင် ဖြစ်သည်။  တရားမဝင် ငါးဖမ်းခြင်းမှာလည်း အခြား အန္တရာယ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး  ငါးဗုံးခွဲခြင်း နှင့် အဆိပ်ခပ်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်း ပင်လယ်ဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်များကို ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ သားရေကျော လိပ်များမှာ ၁၉၅၀ နှစ်များမှ စ၍ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းမျှ လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ အမဲလိုက်ခြင်းမှာလည်း အချို့သော တိရစ္ဆာန်များ အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်ပြီး  တိရစ္ဆာန် တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အကျိုးအမြတ် အတွက် အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းကလည်း ပင်လယ် သတ္တဝါများမှ အစ ကျားများအဆုံး သတ္တဝါ အများအပြားကို ခြိမ်းခြောက်လျှက် ရှိသည်။ ပင်လယ်နေ သတ္တဝါများသည်လည်း ချုပ်ထိန်းမှု မရှိသော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းများကြောင့် အလွန်အမင်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည်။
မလေးရှား အစိုးရသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ဘက်မျှစေရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထက် လုပ်ငန်းကြီးများကို ပို၍ ဦးစားပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း ခံရသည်။ အချို့သော ပြည်နယ် အစိုးရများသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို တန်ပြန်ရန် ကြိုးစားလျှက် ရှိကြပြီး ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ လျှော့ချရန် ကြိုးစားလျှက် ရှိသည်။ အမျိုးသား ဥယျာဉ် ၂၈ ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၃ ခုမှာ အရှေ့မလေးရှားတွင် ဖြစ်ပြီး ကျန် ၅ ခုမှာ ကျွန်းဆွယ်မလေးရှားတွင် ဖြစ်သည်။  ဆီပါဒန် ကျွန်းကဲ့သို့သော ဇီဝမျိုးကွဲစုံရာ ဒေသများတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအား ကန့်သတ် ထားသည်။  တိရစ္ဆာန် မှောင်ခိုမှုမှာ ကြီးစွာသော ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မလေးရှား အစိုးရမှာ ဘရူနိုင်း အစိုးရ၊ အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရ တို့နှင့် ဆွေးနွေး၍ မှောင်ခိုမှု တားဆီးရေး ဥပဒေများကို တသမတ်တည်း ဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးလျှက် ရှိကြသည်။
ပရိုတွန် ကုမ္ပဏီသည် မလေးရှားရှိ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။
မလေးရှားသည် အတော်အသင့် တံခါးပွင့်ပြီး နိုင်ငံအတွက် အသားပေးကာ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုသို့ လောလောလတ်လတ် ပြောင်းလဲပြီးသော ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်မှာ မက်ခရို စီးပွားရေး အစီအစဉ်များဖြင့် စီးပွားရေး ကိစ္စများကို ထိန်းကျောင်း မောင်းနှင်ရန် ကြိုးစားရာတွင် အရေးပါသော နေရာမှ ရှိပြီး ယခုအခါတွင်မူ အစိုးရ၏ ကဏ္ဍ တဖြည်းဖြည်းချင်း မှေးမှိန်လာသည်။ မလေးရှားသည် အာရှတွင် အကောင်းဆုံးသော စီးပွားရေး မှတ်တမ်းရှိသော နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အထိ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မှာ ပျမ်းမျှ ၆.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။  ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၅ အတွင်း မလေးရှား၏ စီးပွားရေးမှာ အာရှတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှု အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ပြီး အာရှ တွင့် အဆင့် ၆ ရှိကာ တကမ္ဘာလုံးတွင် အဆင့် ၂၀ ရှိ၍ ဩစတြေးလျ၊ ပြင်သစ် နှင့် တောင်ကိုရီးယား တို့ထက် ပို၍ မြင့်သည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား၏ စီးပွားရေးမှာ ၆% တိုးတက်ခဲ့သဖြင့် အာဆီယံတွင် ဖိလစ်ပိုင်၏ ၆.၁% ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အမြင့်ဆုံး တိုးပွားမှု ဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်ကို လူတစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူနိုင်မှု စွမ်းအား နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းမှာ ၇၄၆.၈၂၁ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ ဖြစ်သဖြင့် အာဆီယံတွင် အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပြီးလျှင် တတိယ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတွင် ၂၈ ခုမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက် မှ မလေးရှားနိုင်ငံ ၏ အနာဂတ် အတွက် ၎င်း၏ စိတ်ကူးအား "ရည်မှန်းချက် ၂၀၂၀" ဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး ၂၀၂၀တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ အနေနှင့် မိမိဘာသာ အမှီအခို ကင်းမဲ့စွာ ပြည့်စုံလုံလောက်သော စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ပုံဖော်ထားခဲ့သည်။ နာဂျစ် ရာဇက် မှ မလေးရှား အနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ အဆင့်သို့ ပန်းတိုင် အဖြစ်မျှော်မှန်းထားသော ၂၀၂၀ ခုနှစ် မရောက်မီ စောလျင်စွာ ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြောကြာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ အတွင်း အစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် နှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် အစရှိသည့် အစီအစဉ် ၂ ခု ရှိကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အိတ်ချ်အက်စ်ဘီစီ၏ အစီရင်ခံစာ အရ မလေးရှားသည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတွင် ၂၁ ခုမြောက် အကြီးဆုံး စီးပွားရေး အနေနှင့် ရှိနေမည် ဖြစ်ပြီး ဂျီဒီပီအားဖြင့် ၁.၂ ထရီလီယံ (၂၀၀၀ ခုနှစ် ဒေါ်လာတန်ဖိုး) မျှ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လူတစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီ အနေနှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၉,၂၄၇ ဒေါ်လာ (၂၀၀၀ ခုနှစ် ဒေါ်လာတန်ဖိုး) ဖြင့် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အစီရင်ခံစာမှ ဖော်ပြထားချက်များတွင် အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများ၊ ဓာတ်ဆီ နှင့် အရည်အဖြစ် ပြောင်းထားသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်သူများ အနေဖြင့် လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ သိသာစွာ တိုးတက်လာသည်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ မလေးရှား၏ လူတစ်ဦးချင်း သက်တမ်း၊ အခြားသူများ ထက်သာလွန်သော ကျောင်းနေမှုနှင့် သာမန်ထက်ပိုသော မွေးဖွားနှုန်းတို့က စီးပွားရေး တိုးချဲ့မှုများ အတွက် ကူညီ ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်ဟု ဆိုထားသည်။  ခရက်ဒစ် ဆွိစ် မှ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဗစ်တာ ရှဗက်မှ "မလေးရှားတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာရန် လိုအပ်သော အရာများ အားလုံး ရှိသည်" ဟု ဆိုခဲ့သည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အပေါ် အခြေခံထားသော စီးပွားရေးမှာ ကဏ္ဍ စုံလင်သော စီးပွားရေး အဖြစ်သို့ စတင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှ စ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလွန်မြင့်မားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဦးဆောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး သည် ၁၉၉၇ အာရှ ငွေကြေးဂယက်တွင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများထက် စောလျင်စွာ ပြန်လည်ဦးမော့ လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ငွေကြေးဂယက် မဖြစ်မီ အချိန် လူတစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၄,၈၀၀ သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ စီးပွားရေး မညီမျှမှုများမှာ မတူညီသော လူမျိုးများ အကြား တည်ရှိနေခဲ့သည်။ တရုတ်လူမျိုးများမှာ နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၄ ပုံ ၁ပုံမျှ သာ ရှိသော်လည်း ဈေးကွက် အတွင်းရှိ အရင်းအနှီး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။  မလေးရှားရှိ တရုတ်တို့၏ စီးပွားရေးမှာ ဝါးလုံး ကွန်ယက်ဟု ခေါ်သော အရှေ့တောင် အာရှ ဈေးကွက် အတွင်း မိသားစု နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရ ဆက်နွယ်နေကြသော နိုင်ငံခြားရောက် တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကွန်ယက်၏ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်။
ပက်ထရိုးနက်စ် တာဝါ တွင် မလေးရှား နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီ ပက်ထရိုးနပ်စ်၏ ရုံးချုပ် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တွင်တာဝါ များတွင် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။
မလက်ကာ ရေလက်ကြားနှင့် ကပ်လျှက် ရှိနေသော ပင်လယ်ကူး သင်္ဘော သွားလာရေး လမ်းကြောင်းမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး တို့မှာ အဓိက စီးပွားရေး ကဏ္ဍများ ဖြစ်ကြသည်။ မလေးရှားသည် သဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ တင်ပို့ရောင်းချသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဓာတ်ဆီမှာ အဓိက ပို့ကုန် ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က မလေးရှား သည် ကမ္ဘာတွင် ခဲမဖြူ၊ ရာဘာ နှင့် စားအုန်းဆီ အများဆုံး တင်ပို့သော နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မလေးရှား၏ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံပုံစံမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှ တခြားသို့ ပြောင်းလဲ ဦးတည်လျှက် ရှိသော်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အပေါ် များစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။  မလေးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စားအုန်းဆီ အများဆုံး ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးအား တခြား ကဏ္ဍများသို့ ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် တင်ပို့ကုန်အပေါ်တွင် မှီခိုနေမှုအား လျှော့ချရန် အတွက် အစိုးရသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်လာစေရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းသည် မလေးရှားတွင် တတိယမြောက် နိုင်ငံခြားငွေ အများဆုံး ရရှိသော လုပ်ငန်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တိုးတက်လာသော စက်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားရေးကြောင့် လေထု ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ရေထု ညစ်ညမ်းမှု များစွာ ဖြစ်ပွားပြီး သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းများကလည်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပေါ်တွင် မကောင်းသည့် ဘက်မှ အကျိုးသက်ရောက် စေခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်သော မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ် တစ်စင်း ပျောက်ဆုံးခြင်း နှင့် အခြား လေယာဉ်တစ်စင်း ဇူလိုင်လ အတွင်း ယူကရိန်း နိုင်ငံ ပေါ်တွင် ပစ်ချခံခဲ့ရခြင်း တို့ကြောင့် ခရီးသည်နှင့် လေယာဉ် အမှုထမ်း စုစုပေါင်း ၅၃၇ ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပေါ်တွင် ဖိအားများ သက်ရောက်စေခဲ့သည်။ လေကြောင်းလိုင်း အနေနှင့် ၃ နှစ်တာမျှ အမြတ်မရရှိခဲ့သဖြင့် အစိုးရ အနေနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ၎င်းတို့ မပိုင်ဆိုင်သေးသော ရှယ်ယာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် လေကြောင်းလိုင်းကို နိုင်ငံပိုင် အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။. ၂၀၁၃ ခု နှင့် ၂၀၁၄ ခု ကြားတွင် မလေးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အငြိမ်းစား ယူသည့် အခါ နေထိုင်ရန် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရပြီး ကမ္ဘာ့ အငြိမ်းစား ညွှန်းကိန်း တွင် တတိယ နေရာမှ ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းမှာ "မလေးရှား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒုတိယအိမ်" ဆိုသည့် အစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများအား နိုင်ငံအတွင်း ရေရှည် နေထိုင်ရန် ဗီဇာ ၁၀ နှစ်မျှ ထုတ်ပေးခြင်း၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား အနေနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် အကောင်းဆုံး အငြိမ်းစားယူ နေထိုင်ရန် နေရာနှင့် အာရှတွင် အကောင်းဆုံး အငြိမ်းစားယူ နေထိုင်ရန် နေရာ အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ပူနွေးသော ရာသီဥတု နှင့် ဗြိတိသျှတို့၏ ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့ဖူး​သော နောက်ခံ အခြေအနေက နိုင်ငံခြားသားများအား ဒေသခံတို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် လွယ်ကူစေသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် အစ္စလာမ် ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင် ဗဟိုဌာန တစ်ခု အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ထိုကဏ္ဍအတွင်း အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း အများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ အသိဉာဏ်ပေါ်တွင် အခြေခံသော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှာလည်း တိုးပွားလျှက် ရှိသည်။  မိမိဘာသာ အားကိုးနိုင်သော ကာကွယ်နိုင်စွမ်း နှင့် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မလေးရှားသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် နိုင်ငံ၏ စစ်ရေး လုပ်ငန်း အချို့ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆိုင်သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား ကာကွယ်ရေး နှင့် ဆိုင်သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကောင်စီ အောက်သို့ ထည့်သွင်း ခဲ့သည်။ အစိုးရ အနေနှင့် ဤကဏ္ဍအား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိပြီး ကာကွယ်ရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အတွက် ဈေးကွက်ကိုလည်း အစဉ်တစိုက် ရှာဖွေလျှက် ရှိသည်။
မလေးရှားရှိ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများကို သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ၊ အိုင်တီနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ အများဆုံး တင်ပို့ ရောင်းချနေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ မလေးရှားသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အာကာသ အစီအစဉ်များကို စတင် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရုရှားမှ မလေးရှားနိုင်ငံသား တစ်ဦးအား နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်း သို့ ပို့ဆောင်ပေးရန် သဘောတူခဲ့ပြီး တော်ဝင် မလေရှား လေတပ်မှ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်း မြောက်များစွာ တန်သော ရုရှား၏ ဆူကိုဟိ အက်စ်ယူ-၃၀ အမ်ကေအမ် တိုက်လေယာဉ်များကို ဝယ်ယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစိုးရသည် ရာဇက်ဆက် အစီအစဉ်ဖြင့် ဂြိုဟ်တုများ တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံကို ခြုံ၍ ကြည့်မည်ဆိုပါက အာရှ၌ အဖွံ့ဖြိုးဆုံး များထဲတွင် ပါဝင်ပြီး အာရှတွင် အဆင့် ၈ ရှိကာ ကမ္ဘာတွင် အဆင့် ၂၅ ရှိသည်။  မလေးရှားသည် လမ်းတို့၏ အရည်အသွေး၊ ဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၏ အရည်အသွေး၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၏ အရည်အသွေးတို့တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၉ ရှိသော်လည်း လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှု အရည်အသွေး တွင်မှု ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၉ သာ ရှိသည်။ ၎င်း၏ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်သည် အရှေ့တောင် အာရှတွင် စင်ကာပူပြီးလျှင် ဒုတိယ နေရာမှ လိုက်ပြီး လိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူ ၄.၇ သန်း နှင့် ဆယ်လူလာဖုန်း အသုံးပြုသူ သန်း ၃၀ မျှ ရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်း ၇ ခု ရှိပြီး အဓိက ဆိပ်ကမ်းမှာ ကလန်း ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်သည်။ စက်မှု ရပ်ဝန်း ဒေသ ၂၀၀ ရှိပြီး အထူးပြု စက်မှု ရပ်ဝန်းများဖြစ်သော နည်းပညာရပ်ဝန်း မလေးရှား နှင့် ကူလင်း ဟိုင်းတက်ခ် ရပ်ဝန်း စသည်တို့လည်း ရှိသည်။ လူဦးရေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် အတွက် ရေကောင်းရေသန့် ရနိုင်သည်။ ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းက ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို စီးပွားရေး အရ အရေးပါသော မြို့ကြီးများ နှင့် လုံခြုံရေး အရ စိုးရိမ်ရသော ဒေသများကိုသာ အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဒေသများကို ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အာရုံစိုက်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကျွန်းဆွယ် မလေးရှား၏ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နောက်ကျန်နေခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်မှာ မြို့ပြဒေသများတွင် အားကောင်းသော်လည်း ကျေးလက်နေသူများ အတွက်မူ ကောင်းစွာ မရနိုင်ပေ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဘာကွန်းဆည်ကို တည်ဆောက်နေစဉ်
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံကဏ္ဍတွင် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးဆုံးသော လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် တဲနာဂါ နေရှင်နယ် မှ လွှမ်းမိုးထားပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် မလေးရှားရင်းဂစ် ၉၉.၀၃ ဘီလီယံ မျှ ရှိသော ပစ္စည်းများ ရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည် နိုင်ငံတော် ဂရစ် မှ တဆင့် လျှပ်စစ်ရရှိရန် ဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်းဆွယ် အတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ပို့လွတ်သော ဓာတ်အားခွဲရုံ ၄၂၀ ကျော်မျှ ရှိကာ ခန့်မှန်းခြေ ကီလိုမီတာ ၁၁,၀၀၀ ကျော်မျှ ရှည်လျားပြီး ၁၃၂၊ ၂ရ၅ နှင့် ၅၀၀ ကီလိုဗို့ တို့ဖြင့် ပို့လွှတ်နေသော ဓာတ်အားပေးလိုင်းများ ရှိသည်။ မလေးရှား၏ စုစုပေါင်း ပါဝါ ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၂၉,၂၇၈ မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၁၄၀,၉၈၅.၀၁ ဂစ်ဂါဝပ် ဟာဝါ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လျှပ်စစ် သုံးစွဲမှုမှာ ၁၁၆,၀၇၈.၅၁ ဂစ်ဂါဝပ် ဟာဝါ ဖြစ်သည်။ မလေးရှား၏ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမှာ လောင်စာဆီနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပေါ်တွင် မူတည်နေပြီး မလေးရှားရှိ လောင်စာဆီ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သိုက်များ ကြောင့်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မလေးရှား၏ လောင်စာဆီ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်သည် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့ ပြီးလျှင် စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ 
မလေးရှား၏ အရှည်ဆုံး ဟိုင်းဝေးလမ်းမ ဖြစ်သော တောင်မြောက်အမြန်လမ်း
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကုန်းလမ်း ကွန်ယက်သည် အာရှတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ကွန်ယက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၈၉,၇၂၈မိုင် (၁၄၄,၄၀၃ ကီလိုမီတာ) မျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ အဓိက နိုင်ငံတော်၏ ကုန်းလမ်းကွန်ယက်မှာ မလေးရှား ဖက်ဒရယ် လမ်း စနစ်ဖြစ်ပြီး ၃၁,၀၂၈မိုင် (၄၉,၉၃၅ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသည်။ မလေးရှားရှိ ဖက်ဒရယ် လမ်း အများစုမှာ ၂ လမ်းသွားများ ဖြစ်ကြသည်။ မြို့နေရာများတွင်မူ ဖက်ဒရယ် လမ်းများမှာ ကားများ ပိုသွားနိုင်ရန် ၄ လမ်းသွား ဖောက်လုပ်ထားသည်။ ဖက်ဒရယ်လမ်း အများစုကို ကတ္တရာ ခင်းထားသော်လည်း စကူဒိုင်း-ပွန်တယံ အဝေးပြေးလမ်း၏ တစိတ်တဒေသကို ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းထားပြီး ကလန်းမှ ကွာလာလမ်ပူသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ဖက်ဒရယ် အဝေးပြေးလမ်း၏ တစိတ်တဒေသကို နိုင်လွန်ကတ္တရာ ခင်းထားသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ၁,၁၁၇မိုင် (၁,၇၉၈ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော အဝေးပြေးလမ်းများ ရှိပြီး အရှည်လျားဆုံး အဝေးပြေးလမ်းမှာ ၄၉၇မိုင် (၈၀၀ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော တောင်မြောက်အမြန်လမ်း ဖြစ်ကာ မလေးရှားကျွန်းဆွယ်၏ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ဖောက်လုပ်ထားပြီး အဓိက မြို့ကြီးများဖြစ်သော ကွာလာလမ်ပူမြို့၊ ပီနန်မြို့ နှင့် ဂျဟိုးဘာရူးမြို့ တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ မလေးရှား ရင်းဂစ် ၂၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈.၂၃ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိသော ပန်ဘော်နီယို အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်းကို ကြေငြာခဲ့ပြီး မြို့ချင်းဆက်လမ်းများကို နှစ်လမ်းသွား အမြန်လမ်းများ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်ခြင်းအားဖြင့် အရှေ့မလေးရှားရှိ အဝေးပြေးလမ်းတို့၏ အဆင့်ကို ကျွန်းဆွယ်မလေးရှား၏ ကွာလတီနှင့် ညီမျှအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
အီပိုး ဘူတာရုံတွင် တွေ့ရသော ကေတီအမ် အီးတီအက်စ် ၉၁ (ဝဲ) နှင့် ကေတီအမ် ကွန်မျူတာ ကလပ်စ် ၉၂ (ယာ)
မလေးရှားတွင် ရထားလမ်း အရှည် ၁,၁၃၉မိုင် (၁,၈၃၃ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိပြီး ၄၇၇မိုင် (၇၇၆) မိုင်မှာ အသွားအပြန် လမ်း နှင့် လျှပ်စစ်ရထားလမ်းတို့ ဖောက်လုပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ရထားပို့ဆောင်ရေးတွင် အကြီးစားရထား (ကေတီအမ်)၊ အပေါ့စား ရထား၊ တစ်လမ်းပြေးရထား(အမြန်ရထား)၊ ကြိုးဆွဲရထား (ပီနန်တောင် ရထား) စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အကြီးစားရထားများကို မြို့တစ်မြို့ နှင့် တစ်မြို့ အကြား ခရီးသည်များနှင့် ကုန်စည်များကို ပို့ဆောင်ခြင်း အပြင် မြို့ပြ ခရီးသွား ပြည်သူများကို ပို့ဆောင်ရေး အတွက် အသုံးပြုသည်။ အပေါ့စားရထားများကိုမူ မြို့ပြများ အတွင်း မြို့တွင်း အများပြည်သူများကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် နှင့် ကွာလာလမ်ပူမြို့တို့ကို ဆက်သွယ် ပို့ဆောင်ပေးသော ရထား ၂ စင်းလည်း ရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော တစ်လမ်းပြေး ရထားမှာ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အသုံးပြုထားပြီး တစ်ခုတည်းသော ကြိုးဆွဲရထားမှာ ပီနန်တွင် ရှိသည်။ အမြန်ရထားစီမံကိန်း ဖြစ်သော ကေဗွီအမ်အာရ်တီသည် ကွာလာလမ်ပူမြို့၏ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် လက်ရှိ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သည်။ ရထားကွန်ယက်မှာ ကျွန်းဆွယ် မလေးရှားရှိ ပြည်နယ် ၁၁ခုလုံးသို့ ရောက်ရှိ ဆက်သွယ်ထားသည်။ အရှေ့မလေးရှားတွင်မူ ဆာဘားပြည်နယ်၌သာ ရထားလမ်း ရှိသည်။ ရထားလမ်းမှာ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ အကျယ် ရထားလမ်း ဖြစ်သော ထိုင်းရထားလမ်းနှင့်လည်း မြောက်ဘက်တွင် ဆက်သွယ်ထားသည်။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံသာ ရထားလမ်းအား ပြန်လည်တည်ဆောက်မည် ဆိုပါက မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ နှင့် တရုတ်တို့သို့ ရထားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်သော ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
မလေးရှားတွင် လေဆိပ် ၁၁၈ ခုရှိပြီး ၃၈ ခုတွင် ပြေးလမ်းခင်းထားသည်။ နိုင်ငံပိုင် လေကြောင်းလိုင်းမှာ မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။ အဓိက နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ် နှင့် အနောက်မလေးရှား နှင့် အရှေ့မလေးရှားတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးသော ခရီးစဉ်များအား မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း၊ အဲယား အေးရှား၊ မလင်ဒို အဲယားတို့မှ ပြေးဆွဲလျှက် ရှိပြီး ပြည်တွင်း ခရီးစဉ် အတိုများကို လေကြောင်းလိုင်း အသေးများ ဖြစ်သော အမ်အေဆွင်း၊ ဖိုင်းယားဖလိုင်း နှင့် ဘာဂျားယားအဲယားတို့မှ ပံ့ပိုးပြေးဆွဲပေးလျှက် ရှိသည်။ အဓိက ကုန်တင် လေကြောင်းလိုင်းများမှာ အမ်အေအက်စ် ကာဂို နှင့် ထရန်စမိုင်း အဲယား ဆားဗစ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် မလေးရှား၏ အဓိကနှင့် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၃ ခုမြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသည် အများဆုံး အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး စုစုပေါင်း ခရီးသည် ၄၈.၉ သန်းမျှ ရှိသည်။ အခြား အဓိက လေဆိပ်များတွင် ခရီးသည် ၆.၉ သန်း ရှိပြီး မလေးရှား၏ ဒုတိယ အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်နှင့် အရှေ့မလေးရှား၏ အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်သော ကိုတာ ကင်နာဘာလူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည် ၅.၃ သန်းရှိပြီး မလေးရှား၏ ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး မြို့ပြဒေသကို ဆက်သွယ်ပေးသော လေဆိပ်ဖြစ်သည့် ပီနန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် တို့ ပါဝင်သည်။
ဆလန်ဂေါရှိ ကလန်းဆိပ်ကမ်းမှာ မလေးရှား၏ အကြီးဆုံးနှင့် အလုပ်အများဆုံး သင်္ဘောဆိပ် ဖြစ်သည်။
မလေးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးအပါဆုံး သင်္ဘောသွားလာရာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သော မလက်ကာ ရေလက်ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ မလေးရှား ရှိ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်း အခု ၂၀ တွင် ပါဝင်သည်။ ကလန်းဆိပ်ကမ်း နှင့် တန်ဂျွန် ပီလာပတ်စ် ဆိပ်ကမ်းတို့မှာ အရှေ့တောင်အာရှတွင် စင်ကာပူ ဆိပ်ကမ်းပြီးလျှင် ဒုတိယ နှင့် တတိယမြောက် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကလန်းဆိပ်ကမ်းသည် မလေးရှားတွင် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၃ ခုမြောက် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်း တစ်ခု ဖြစ်ကာ ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ ၁၀.၃ သန်းနှင့် ညီမျှသော ကုန်ကို အတင်အချ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တန်ဂျွန် ပီလာပတ်စ် ဆိပ်ကမ်းမှာ မလေးရှား၏ ဒုတိယမြောက် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ ၁၉ ခုမြောက် အလုပ်အများဆုံး ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ဖြစ်ကာ ပေ၂၀ ကွန်တိန်နာ ၇.၆ သန်းနှင့် ညီမျှသော ကုန်ကို အတင်အချ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရေပေးဝေမှု နှင့် စွန့်ထုတ်မှု
လူတိုင်းမှ ရေ အား သင့်တင့်မျှတသော ဈေးဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်းသည် ကြီးစွာသော အောင်မြင်မှု တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အနေနှင့်လည်း ရေပေးဝေရေး ကဏ္ဍကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော ဘဏ္ဏာငွေ ရရှိနိုင်ရန် နှင့် သုံးစွဲသူ အခြေပြုသော ဝန်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စသည်တို့အတွက် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများမှ တဆင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှ ရေရရှိရေး ကဏ္ဍအတွက် ကိုယ်ပိုင် သီးခြားအုပ်ချုပ်သော ကြီးကြပ်သူ အေဂျင်စီ၊ ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲသည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အသွင် ပြောင်းလဲထားသော နိုင်ငံပိုင် ရေပေးဝေရေး ကုမ္ပဏီတို့ ပါဝင်သည့် ခေတ်မီသော အဖွဲ့အစည်း ပုံစံ ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ရေပေးဝေရေး ကုမ္ပဏီ အနေနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီအောင် လုပ်ဆောင်ရန် ကြီးကြပ်သူ အေဂျင်စီမှ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အစိုးရ အနေနှင့်လည်း ရေပေးဝေရေး ကဏ္ဍအတွက် ပုဂ္ဂလိကသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အသစ်များ ချမပေးတော့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ထိုသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ချပေးခဲ့ရာမှ ရလဒ် အမျိုးမျိုး ရရှိလာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သော်လည်း စိန်ခေါ်မှု အမြောက်အများ ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ထိုစိန်ခေါ်မှုများ ထဲမှ အချို့ကိုသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းမှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ပထမ တစ်ချက်မှာ ရေခွန်မှာ နည်းသဖြင့် ကုန်ကျငွေကို ပြန်လည်ရရှိရန် လက်ရှိ အနေအထားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ဘဲ ရေပေးဝေရေး ကဏ္ဍ အနေနှင့် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ပေါ်တွင် မှီခိုနေရဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ တစ်ချက်မှာ ရေရယူလိုအား စီမံခန့်ခွဲမှု အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်သော်လည်း ရေဆုံးရှုံးမှု နှင့် လူတစ်ဦးချင်း ရေသုံးစွဲမှုမှာ မြင့်မားနေဆဲ ဖြစ်သည်။ တတိယ အချက် အနေနှင့် ပါဟန်းမြစ်မှ ကွာလာလမ်ပူသို့ ရေအမြောက်အများ သွယ်ယူ သုံးစွဲသည့် ကိစ္စမှာ လူမှု နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများကြောင့် အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ စတုတ္ထ အချက်မှာ မိလ္လာနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များကို သန့်စင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ ရေပေးဝေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဥပမာအားဖြင့် ရေဆိုးရေညစ်များကို စုဆောင်းနိုင်သော်လည်း သန့်စင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ရေဆိုးနှုတ် စနစ်မှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ရေပေးဝေရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။
၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်းအရ မလေးရှား လူဦးရေတွင် လူမျိုးများ ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်စစ်တမ်းများအရ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ လူဦးရေသည် ၂၈, ၃၃၄, ၁၃၅ ယောက်ဖြစ်သဖြင့်။  ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၄၂ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၉၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မလေးရှားနိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသားများကို လူမျိုးဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး ၆၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘူမိပူထရ များ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဘူမိပူထရများ၏ အများဆုံးသော အုပ်စုမှာ မလေးလူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များ အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားကာ ၎င်းတို့ အနေနှင့် မလေး ထုံးစံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ကျင့်သုံးကြသည်။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံရေး အားဖြင့် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြသည်။ ဘူမိပူထရ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသူများတွင် မလေးမဟုတ်သော ရှေးဦးနေ လူမျိုးများ ပါဝင်ကြပြီး ထိုင်းလူမျိုးများ၊ ခမာလူမျိုးများ၊ ချမ်လူမျိုးများ နှင့် ဆာဘား နှင့် ဆာရာဝပ်ရှိ ရှေးဦးနေ လူမျိုးများ ပါဝင်သည်။ မလေးမဟုတ်သော ဘူမိပူထရများသည် ဆာရာဝပ် လူဦးရေ၏ တစ်ဝက်ကျော် ရှိပြီး ဆာဘား လူဦးရေ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံ ကျော်မျှ ရှိသည်။ ရှေးဦးနေ လူမျိုး အနည်းငယ်သည် ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် ရှိပြီး ၎င်းတို့အား စုပေါင်း၍ အိုရန် အက်ဆလီ ဟု ခေါ်ကြသည်။ မည်သူ့အား ဘူမိပူထရ အဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဆိုသော ဥပဒေသည် ပြည်နယ် အလိုက် ကွဲပြားသည်။
အခြားသော လူနည်းစု လူမျိုးများမှာ ဘူမိပူထရ အဆင့် မရကြချေ။ လူဦးရေ၏ ၂၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မလေး တရုတ် လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၏ ၇.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မလေးကုလား လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်တို့မှာ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ အရေးပါ အရာရောက်သော လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ပီနန် ပြည်နယ်ရှိ လူဦးရေ၏ အများစု ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယမှ ပြောင်းရွှေ့လာသများ အများအားဖြင့် တမီလ် လူမျိုးများသည် မလေးရှားသို့ ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းတွင် စတင် ရောက်ရှိလာကြသည်။ မလေးရှား နိုင်ငံတွင်း မွေးဖွားသူများကို မလေးရှားနိုင်ငံသား အဖြစ် အလိုအလျောက် ပေးအပ်လေ့ မရှိသော်လည်း မလေးရှားနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးမှ မလေးရှားနိုင်ငံ အပြင်ဘက်တွင် မွေးဖွားသော ကလေးကိုမူ နိုင်ငံသား အဖြစ် ပေးအပ်လေ့ ရှိသည်။ နိုင်ငံသား ၂ ခု တစ်ပြိုင်တည်း ခံယူခြင်းအား ခွင့်ပြုမထားပေ။ မလေးရှား ဘော်နီယို ဖြစ်သော ဆာဘား နှင့် ဆာရာဝပ်တွင် နိုင်ငံသား ရရှိခြင်းမှာ ထူးခြားပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကိစ္စရပ်များ အရ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်တွင် နိုင်ငံသား အဖြစ် ရရှိခြင်းနှင့် မတူညီပေ။ နိုင်ငံသားတိုင်းအား မိုင်ကတ်ဒ်ဟု ခေါ်သော ဘိုင်အိုမက်ထရစ် စမတ် ချစ်ပ် ပါဝင်သော စိစစ်ရေး ကတ်ဒ်အား ၁၂ နှစ်ပြည့်သည်မှ စ၍ ထုတ်ပေးထားပြီး မိမိနှင့် တပါတည်း အမြဲ သယ်ဆောင်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု၊ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာတွင် ရှိသော လူဦးရေ
ပညာရေး စနစ်တွင် မသင်မနေရ မဟုတ်သော မူကြို ပညာရေး၊ မသင်မနေရ ၆ နှစ် မူလတန်း ပညာရေး နှင့် သင်ကြားလိုသော ဆန္ဒရှိက သင်ကြားနိုင်သော ၅ နှစ် အထက်တန်း ပညာရေး တို့ ပါဝင်သည်။ မူလတန်းကျောင်းများကို ကဏ္ဍ နှစ်ခု ခွဲထားပြီး မလေးဘာသာဖြင့် သင်ကြားသော နိုင်ငံတော် မူလတန်းကျောင်းများ နှင့် တရုတ် သို့မဟုတ် တမီလ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားသော ဒေသခံ မူလတန်းကျောင်းများ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အထက်တန်း ပညာရေးမှာ ၅ နှစ် သင်ကြားရသည်။ အထက်တန်းပညာရေး နောက်ဆုံးနှစ်တွင် မလေးရှား ပညာရေး အောင်လက်မှတ် စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြရသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် မလေးရှား မက်ထရစ်ကူလေးရှင်း အစီအစဉ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်မှစ၍ မက်ထရစ် ကူလေးရှင်း ကောလိပ်တွင် ၁၂ လ သင်ကြား အောင်မြင်ပြီးသော ကျောင်းသားများ အနေနှင့် ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်များတွင် ဆက်လက် သင်ကြားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း မက်ထရစ်ကူလေးရှင်း စနစ်တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသော နေရာသာ ဘူမိပူထရ မဟုတ်သူ ကျောင်းသားများ အတွက် ဖွင့်ပေးထားသည်။
ပူထရာဂျာရားရှိ ပူထရာ ဗလီ
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မွေးကင်းစ ကလေး သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ အယောက် ၁၀၀၀ လျှင် ၆ ယောက်ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးချင်း၏ သက်တမ်းမှာ ၇၅ နှစ် ဖြစ်သည်။ မလေးရှားအား နိုင်ငံခြားသားများ ဆေးလာကုသည့် နေရာ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် အစိုးရသည် လူမှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘတ်ဂျက်၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အတွက် အသုံးပြုသည်။ လူဦးရေသည် မလေးရှားကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် ပိုမိုသိပ်သည်းပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသား ၂၈ သန်းမှ သန်း ၂၀ သည် ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူဦးရေမှာ မြို့ပြတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ကွာလာလမ်ပူသည် မလေးရှား၏ မြို့တော် နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည့်အပြင်  အဓိက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အချာမြို့ ဖြစ်သည်။ ပူထရာ ဂျာရားမြို့သည် အစိုးရ ရုံးထိုင်ရန် အတွက် ၁၉၉၉ မှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ရုံးများသည် ကွာလာလမ်ပူမြို့ အတွင်း ကျပ်တည်းမှုမှ သက်သာစေရန် ထိုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လုပ်အားကို အသုံးချရသော လုပ်ငန်းများကြောင့် မလေးရှား နိုင်ငံအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၃ သန်းကျော် ခန့် နေထိုင်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြပြီး လူဦးရေ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ဖြစ်သည်။ ဆာဘားတွင် အခြေစိုက်သော အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစိုအရ ဆာဘားတွင် ရှိသော လူဦးရေ ၃ သန်းတွင် ၂ သန်းမှာ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည် ဟုဆိုသည်။ မလေးရှားတွင် ဒုက္ခသည်နှင့် ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသူပေါင်း ၁၇၁.၅၀၀ ခန့်ကို လက်ခံထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် ၇၉,၀၀၀ မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ပြီး ၇၂,၄၀၀ မှာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံမှ ဖြစ်ကာ ၁၇,၇၀၀ မှ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။ မလေးရှား အရာရှိများ အနေနှင့် နိုင်ငံအတွင်းမှ နှင်ထုတ်သူများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လူမှောင်ခိုသမားများထံ တိုက်ရိုက်အပ်နှံသည်ဟု သတင်း ဖော်ပြခြင်း ခံရပြီး မလေးရှား အနေနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေများကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် အငြင်းပွားစရာ သမိုင်းကြောင်းများ ရှိ​သော ရီလာ ဟု ခေါ်သည့် အပျော်တမ်း တပ်ဖွဲ့များကို အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး မြို့ကြီးများ (၂၀၁၀)
1 ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဖက်ဒရယ်နယ်မြေများ ၁,၄၇၅,၃၃၇
2 ဂျဟိုးဘာရူးမြို့ ဂျဟိုး ၉၁၆,၄၀၉
3 အီပိုးမြို့ ပီရက် ၇၀၄,၅၇၂
4 ရှားအလမ်မြို့ ဆလန်ဂေါ ၆၇၁,၂၈၂
5 ပီတလင်း ဂျာယားမြို့ ဆလန်ဂေါ ၆၃၈,၅၁၆
6 ကူချင်းမြို့ ဆာရာဝပ် ၆၁၇,၈၈၇
7 ဂျော့ရှ်တောင်းမြို့ ပီနန် ၅၁၀,၉၉၆
8 ကိုတာဘာရူးမြို့ ကလန်တန် ၄၉၁,၂၃၇
9 ကိုတာ ကင်နာဘာလူးမြို့ ဆာဘား ၄၆၂,၉၆၃
10 ကွာလာ တဲရန်ဂနူးမြို့ တဲရန်ဂနူး ၃၄၃,၂၈၄
11 မလက်ကာမြို့ မလက်ကာ ၃၃၁,၇၉၀
၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်းအရ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ရာခိုင်နှုန်း
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း အစ္စလမ်ဘာသာအား နိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ နှင့် နေထိုင်မှု စာရင်းအရ လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတို့၏ ဆက်စပ်မှုမှာ မြင့်မားသည်။ လူဦးရေ၏ ၆၁.၃% မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ၁၉.၈% မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ၉.၂%မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ၆.၃%မှာ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ၁.၃%မှာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဘာသာ၊ တာအိုဘာသာ နှင့် အခြားသော တရုတ်ရိုးရာ ဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ၀.၇%မှာ ဘာသာမဲ့များ အဖြစ် ခံယူကြပြီး ကျန်ရှိနေသော ၁.၄%မှာ အခြားဘာသာများကို ကိုးကွယ်သည် သို့မဟုတ် မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ဟု မပြောကြပေ။ မလေးရှားတွင် ထင်ရှားသော အစ္စလာမ် ဘာသာခွဲမှာ ရှဖီး ဥပဒေသိပ္ပံပညာမှ ဆွန်နီ အစ္စလာမ် ဘာသာခွဲ ဖြစ်ပြီး ၁၈% သော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့မှာ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ မရှိကြပေ။
မလေးရှား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မလေးဖြစ်ရန် အတွက် မွတ်စလင် ဘာသာကိုးကွယ်ရမည်။ မလေးဘာသာ စကားကို အမြဲပြောဆိုရမည်၊ မလေးထုံးစံ အတိုင်း နေထိုင်ရမည်။ ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှား နှင့် စင်ကာပူတွင် နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ဘိုးဘေးဘီဘင်များ ရှိသူ ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်း အရ တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ၈၃.၆% မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အခြား ကိုးကွယ်မှု အများအပြား ရှိသော ဘာသာများမှာ တာအိုဘာသာ (၃.၄%)၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ (၁၁.၁%) တို့ ဖြစ်ကာ ပီနန်ကဲ့သို့သော ဒေသများတွင် ပန်းသေး အနည်းငယ် ရှိကြသည်။ အိန္ဒိယလူမျိုးများတွင် ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၈၆.၂% မျှ ရှိကာ အခြား ကိုးကွယ်မှု အများအပြား ရှိသော ဘာသာများမှာ ခရစ်ယာန် ၆% နှင့် မွတ်စလင် ၄.၁% တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မလေး မဟုတ်သော ဘူမိပူထရ တို့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၄၆.၅% ရှိကာ ၄၀.၄ % မှာမူ မွတ်စလင် ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
မွတ်စလင်များသည် ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ အတွက် ရှာရီယာ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရသည်။ အစ္စလာမ် တရားသူကြီးများ အနေနှင့် မလေးရှားတို့ လိုက်နာရာ အတွေးအခေါ်ဖြစ်သော ရှဖီး အစ္စလာမ် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရသည်။ ရှာရီယာ တရားရုံးမှ မွတ်စလင်များ အပေါ် ဆုံးဖြတ်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များမှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ အမွေခံခြင်း၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၊ ဘာသာစွန့်ခြင်း၊ ဘာသာပြောင်းခြင်း နှင့် အုပ်ထိန်းခြင်းတို့သာ ဖြစ်သည်။ အခြားသော ရာဇဝတ်မှုများ နှင့် တရားမမှုများအား ရှာရီယာ တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပေ။ ရှာရီယာ တရားရုံးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အရပ်ဖက် တရားရုံးများနှင့် တူညီသည်။ နိုင်ငံအတွင်း အမြင့်ဆုံး တရားရုံးဖြစ်သော်လည်း အရပ်ဖက် တရားရုံးများသည် အစ္စလာမ် ဘာသာ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကြားနာခြင်း မပြုပေ။
မလေးရှားရှိ ဘာသာစကားမိသားစုများကို ရောင်စုံ ပြသထားပုံ
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးနှင့် နိုင်ငံတော် ဘာသာစကားမှာ မလေးရှန်း ဘာသာ ဖြစ်ပြီး မလေးဘာသာစကားကို စံသတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ပေါ်လစီတွင် ထိုဘာသာစကားအား ဘဟာဆား မလေးရှား ဟု ဖော်ပြပြီး မလေးရှန်း ဘာသာစကားဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ သို့သော်လည်း ဥပဒေတွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားကို ဘဟာဆား မလာယု ဟုပင် ရည်ညွှန်းပြီး မလေးဘာသာစကား ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ် အမျိုးသား ဘာသာစကား အက်ဥပဒေ အရ နိုင်ငံတော် ဘာသာစကား၏ ရုံးသုံးစာကို လက်တင် (ရူမီ) စကားလုံးဖြင့် ဖော်ပြရန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ရိုးရာ ဂျာဝီ စာလုံးကို ပိတ်ပင်ထားခြင်း မရှိပေ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အသုံးများသော ဒုတိယ ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၇ အမျိုးသား ဘာသာစကား ဥပဒေ အရ အချို့သော ရုံးသုံးကိစ္စရပ်များတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသည်။ ဆာရာဝပ်တွင်မူ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားသည် မလေးရှန်း ဘာသာစကားနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ သုံးသော ရုံးသုံး ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် တရားဝင် မဟုတ်သော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် သုံးသော ဘာသာစကား ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၆၉ ခုနှစ် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ အပြီးတွင် မလေးဘာသာစကားကို ပို၍ သုံးစွဲလာကြသည်။ မလေးရှန်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား သို့မဟုတ် မလေးရှားစံနှုန်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားမှာ ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်မှ ဆင်းသက်လာသော အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မလေးရှား အင်္ဂလိပ်အား စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြပြီး မန်းဂလစ်ရှ် ခေါ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရပ်သုံး စကားကို မလေးဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ တမီလ်ဘာသာတို့ ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဘာသာစကားကိုလည်း အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ အစိုးရမှ စံမဟုတ်သော မလေးဘာသာစကား သုံးစွဲခြင်းကို အားမပေးသော်လည်း ကြော်ငြာများတွင် ပုံစံမမှန်သော မလေးဘာသာစကား အသုံးပြုခြင်း အတွက် ဒဏ်ရိုက်ရန် လည်း အခွင့်အာဏာ မရှိပေ။
အခြားသော ဘာသာစကား အမြောက်အများကိုလည်း မလေးရှားတွင် သုံးစွဲနေကြပြီး လက်ရှိ ရှင်သန်နေသာ ဘာသာစကား ၁၃၇ မျိုးအား ပြောဆိုသူများ မလေးရှားနိုင်ငံ အတွင်း ရှိသည်။  မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်တွင် ထိုဘာသာစကားများထဲမှ ၄၁မျိုးကို ပြောဆိုသူများ ရှိသည်။ အရှေ့မလေးရှားရှိ နဂိုရ်မူလ လူမျိုးများတွင် ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကားရှိပြီး ထိုဘာသာစကားမှာ မလေးစကားနှင့် ဆင်သော်လည်း အလွယ်တကူ ခွဲခြား၍ ရနိုင်သည်။ ဆာရာဝပ်၏ အဓိက တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားမှာ အီဘန် ဖြစ်ပြီး ဆာဘားတွင် နဂိုရ်မူလနေထိုင်သူများမှာမူ ဒူဆူးနစ် နှင့် ကာဒါဇန် ဘာသာစကားများကို ပြောဆိုကြသည်။ မလေးရှား တရုတ်များမှာ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များရှိ ဒေသခံ စကားများကို ပြောဆိုကြသည်။ နိုင်ငံအတွင်း အသုံးများသော တရုတ်ဒေသခံ စကားများမှာ ကန်တုံစကား၊ မန်ဒရင်စကား၊ ဟောက်ကျန့်စကား၊ ဟာကားစကား၊ ဟိုင်ယန်စကား နှင့် ဖူကျိုး စကားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ မလေးကုလားများ၏ အများစုဖြစ်သော တမီလ်များမှာ တမီလ် ဘာသာစကားကို ပြောဆိုကြသည်။ အခြားသော တောင်အာရှ ဘာသာစကားများကိုလည်း မလေးရှားတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ပြောဆိုကြပြီး ထိုင်းစကားလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံသား အနည်းစုမှာ ကော့ကေးရှန်းတို့မှ ဆင်းသက်လာသဖြင့် ခရီရိုး ဘာသာစကားများဖြစ်သော ပေါ်တူဂီစကားပေါ်တွင် အခြေခံသော မလက်ကာ ခရီရိုး ဘာသာစကား၊ စပိန်စကားပေါ်တွင် အခြေခံသော ချာဗာကာနို ဘာသာစကား တို့ကိုလည်း ပြောဆိုကြသည်။
ကွာလာလမ်ပူတွင် စားဖိုမှူး တစ်ဦးမှ မာတာဘက် ဟုခေါ်သော ကြက်ဥ၊ အသားနှင့် ကြက်သွန်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ကီးမားပလာတာကို ပြင်ဆင်နေစဉ်
မလေးရှားနိုင်ငံသည် လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုစုံ၊ ဘာသာစကားစုံသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိ မူလ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ရှေးဦးနေ တိုင်းရင်းသားများ နှင့် နောင်တွင် ပြောင်းရွှေ့လာသော မလေးလူမျိုးများမှ ဆင့်ပွား ပေါ်ပေါက်လာသည်။ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု စတင်သည်မှ စ၍ တရုတ် နှင့် အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုတို့ သိသာစွာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့သည်။ အခြား လွှမ်းမိုးသော ယဉ်ကျေးမှုများမှာ ပါရှန်းယဉ်ကျေးမှု၊ အာရပ်ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဗြိတိသျှ ယဉ်ကျေးမှုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ အစိုးရ၏ ပုံစံ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ လူမှုပဋိဉာဏ် အပိုဒ်ကြောင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို အနည်းငယ်မျှသာ လက်သင့်ခံသည်။
၁၉၇၁ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ နိုင်ငံတော် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး မလေးရှား ယဉ်ကျေးမှုကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ ထို ဖွင့်ဆိုချက်အရ မလေးရှား ယဉ်ကျေးမှုသည် မလေးရှားတွင် ရှေးဦးနေထိုင်သော လူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ပေါ်တွင် မူတည်ရမည် ဖြစ်ပြီး အခြားသော ယဉ်ကျေးမှုများမှ သင့်တော်သော အချက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်သော်လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာသည် တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ပါဝင်နေရမည် ဟု ဆိုထားသည်။ ၎င်းမှ မလေးဘာသာစကားကို အခြားဘာသာ စကားများထက် ပို၍ မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားသည်။ ထိုသို့ အစိုးရမှ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကြောင့် မလေးမဟုတ်သူများ အကြားတွင် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု လျော့နည်းလာသည်ဟု ခံစားရပြီး မကျေမနပ် ဖြစ်ကြရသည်။ တရုတ် နှင့် အိန္ဒိယ အသင်းအဖွဲ့များမှ အစိုးရသို့ ကြေငြာချက်များကို တင်သွင်းကြပြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျသော ယဉ်ကျေးမှု ပေါ်လစီကို ဖော်ထုတ်သည်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။
မလေးရှားနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့ ကြားတွင် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု အချို့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ ၂ နှစ်နိုင်ငံ အနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေဆက်ခံရာ တူညီကြပြီး ရိုးရာ နှင့် အချက် အတော်များများတွင် တူညီကြသည်။ သို့သော်လည်း ချက်ပြုတ်သော ဟင်းလျာများမှ စ၍ နိုင်ငံတော်သီချင်း အထိ အမျိုးမျိုးသော ကိစ္စရပ်များတွင် အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၎င်းတို့၏ အမျိုးသား အမွေဆက်ခံမှုကို ကာကွယ်ရန် ပြင်းထန်သော ခံစားမှု ရှိသည်။ မလေးရှား အစိုးရ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံပြီး ယဉ်ကျေးမှုများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ထပ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားကြသည်။ မလေးရှားတွင်မူ ခံစားချက် မပြင်းထန်ဘဲ အများစု အနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုး အများစုမှာ နှစ်ဖက်စလုံး နှင့် ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပါတိတ် ယက်လုပ်သူမှ ပါတိတ် ထုတ်လုပ်နေပုံ။ မလေးရှား ပါတိတ်တွင် ပန်းပွင့်များနှင့် အရောင်ဖျော့ဖျော့ ရှိသည်။
မလေးရှား ရိုးရာ အနုပညာမှာ ပုံဖော်ထွင်းထုခြင်း၊ ယက်လုပ်ခြင်း နှင့် ငွေပန်းထိမ် လုပ်ခြင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။. ရိုးရာ အနုပညာများတွင် ကျေးလက်မှ လက်ဖြင့် ယက်လုပ်သော ခြင်းတောင်းမှစ၍ မလေးရှား လွှတ်ရုံးများရှိ ငွေပန်းထိမ် လက်ရာများ အထိ ပါဝင်သည်။ အတွေ့ရများသော အနုပညာ လက်ရာများတွင် အလှဆင်သော ခရစ်ခေါ် မလေးဓား၊ ကွမ်းအစ်၊ ယက်လုပ်ထားသော ပါတိတ်များနှင့် ဆောင်ကက် ချည်ထည်တို့ ပါဝင်သည်။ ရှေးဦးနေ အရှေ့ မလေးရှား လူမျိုးများတွင် ၎င်းတို့၏ သစ်သား မျက်နှာဖုံးများအား လူသိများကြသည်။  တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးချင်းစီတွင် ထင်ရှားသော ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာများ ရှိပြီး တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အနည်းငယ် ဆင်သည်များ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း မလေးအနုပညာတွင် မြောက်အိန္ဒိယ လွှမ်းမိုးမှုများကို တွေ့ရပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ အိန္ဒိယ လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရိုးရာ မလေးဂီတနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာများမှ ကလန်တန်-ပတ်ထာနီ ဒေသမှ အစပျိုး ဆင်းသက်သည်ဟု ထင်မြင်ရပြီး အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း နှင့် အင်ဒိုနီးရှား တို့၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်နေသည်။ ဂီတမှာ ဗုံများပေါ်တွင် အခြေခံ ထားပြီး  အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဂန်ဒမ်း ဟု ခေါ်သော ဗုံ ဖြစ်သည်။ ရိုးရာ ဗုံ အနည်းဆုံး ၁၄မျိုး ရှိသည်။ ဗုံများ နှင့် အခြားသော ရိုးရာ ပုတ်၍ တီးခတ်ရသော တူရိယာများမှာ သဘာဝ ပစ္စည်းများဖြင့် အမြဲလိုလို ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြသည်။ ဂီတကို ပုံပြောရာတွင် လည်းကောင်း၊ အခမ်းအနား များတွင် လည်းကောင်း၊ ကောက်ရိတ်သိမ်းခြင်း စသော ပွဲတော်များတွင်လည်းကောင်း တီးမှုတ်လေ့ ရှိကြသည်။ တစ်ချိန်က အဝေး ဆက်သွယ်ရေး အတွက်လည်း အသုံးပြုခဲ့သေးသည်။  အရှေ့မလေးရှားတွင်မူ မောင်းကို အခြေခံထားသော တီးဝိုင်းများ ဖြစ်သည့် အာဂေါင်း နှင့် ကူလင်တန် တို့ကို အသုဘ နှင့် မင်္ဂလာဆောင် အစရှိသော အခမ်း အနားများတွင် တီးမှုတ်လေ့ ရှိကြသည်။။  ထိုတီးဝိုင်းများမှာ အိမ်နီးချင်း ဒေသများ ဖြစ်ကြသော ဖိလစ်ပိုင်ရှိ မင်ဒါနောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားရှိ ကာလီမန်တန် နှင့် ဘရူနိုင်တို့တွင်လည်း အလားတူ တီးမှုတ်လေ့ ရှိကြသည်။
မလေးရှားတွင် အလွန်ခိုင်မာသော ပါးစပ်ပြော ရိုးရာ ရှိပြီး စာရေးသားမှု မပေါ်ခင်ကပင် ရှိခဲ့ကာ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ မလေးစူလ်တန် တစ်ဦးချင်စီတို့သည် ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင် စာပေ ယဉ်ကျေးမှုများကို ဖန်တီးကြပြီး ယခင်က ရှိနေသော ပါးစပ်ပြော ဇာတ်လမ်းများ နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာ နှင့် အတူ ပါလာသော ဇာတ်လမ်းများမှ ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိသည်။ ပထမဆုံး မလေးစာပေမှာ အာရေဗျ စကားလုံးဖြင့် ရေးသားထားသည်။ အစောဆုံး မလေး စာမှာ ၁၃၀၃ ခုနှစ် တဲရန်ဂနူး ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ရေးထိုးထားသော စာဖြစ်သည်။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ စကားပြောသူ များလာသည်နှင့် အမျှ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ စာပေများလည်း များပြားလာခဲ့ကာ ၁၉ ရာစုမှ စ၍ ထိုဘာသာစကားတို့ဖြင့် ဖန်တီးထားသော စာပေများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်သည်လည်း စာပေအတွက် အသုံးများသော ဘာသာစကား တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ တွင် အစိုးရမှ ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားထားသော စာပေများကို အမည်ဖွင့်ဆိုရန် ခြေလှမ်းစခဲ့သည်။ မလေးဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော စာပေများကို "မလေးရှား၏ အမျိုးသား စာပေများ" ဟုလည်းကောင်း၊ အခြား ဘူမိပူထရ ဘာသာစကားများနှင့် ရေးသားထားသော စာပေများကို "ဒေသခံစာပေများ" ဟူ၍ လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုကြပြီး အခြာဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာပေများကို ဆက်ရှင်နယ် စာပေ ဟုလည်းကောင်း ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ မလေးဘာသာ ကဗျာစာပေမှာလည်း အလွန်ပင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားကြသည်။ ဟိကာရက် ပုံစံသည် လူကြိုက်များပြီး ပန်တမ် ပုံစံမှာ မလေးဘာသာမှ အခြားဘာသာများသို့ ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိ သွားသည်။
တေတာရစ် (လက်ဖက်ရည် ဆွဲဖျော်)
နိုင်ငံတော် စားစရာ နှင့် သောက်စရာ
မလေးရှား အစားအသောက်များသည် နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ၏ လူမျိုးစုံမှုကို ထင်ဟပ်ပြနေသည်။  နိုင်ငံအတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတို့ရှိ ယဉ်ကျေးမှုများမှ အစားအသောက်များပေါ်တွင် အလွန်ပင် လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေသည်။မလေး၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဂျာဗား နှင့် ဆူမားတြား ယဉ်ကျေးမှုတို့မှ လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသည် ရှေးခေတ်အခါက ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်များ ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ရာ လမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိနေခြင်းမှာ အဓိက အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်သည်။  အစားအသောက်များသည် စင်ကာပူ နှင့် ဘရူနိုင်းတို့ရှိ အစားအသောက်များနှင့် အလွန်ဆင်ပြီး  ဖိလစ်ပိုင် အစားအသောက်များ နှင့် တူသည်လည်း ရှိသည်။  မတူညီသော ပြည်နယ်များတွင် ကွဲပြားသော ဟင်းလျာများ ရှိပြီး မလေးရှားရှိ အစားအသောက်များမှာ မူရင်း အစားအသောက်များနှင့် ကွဲပြားနေသည်ကို အမြဲတစေ တွေ့ရတတ်သည်။
မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် မူရင်းယဉ်ကျေးမှုတွင် မတွေ့ရသော အစားအစာများသည် အခြားယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပေါင်းစပ်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မလေးရှားရှိ တရုတ် စားသောက်ဆိုင်များသည် မလေးဟင်းလျာများကို အမြဲတစေ ရောင်းချလေ့ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုမှ အစားအသောက်များကိုလည်း အခြားယဉ်ကျေးမှုမှ စတိုင်လ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်လေ့ ရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ငပိနှင့် ဆန်ဘယ်ဆော့စ် တို့ကို တရုတ်စားသောက်ဆိုင်များတွင် ထည့်သွင်း ချက်ပြုတ်လေ့ ရှိကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မလေးရှားရှိ အစားအသောက်များကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုသို့ ပြန်၍ ခြေရာခံနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် သီးခြား ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထမင်းသည် ဟင်းလျာ အများစု နှင့် တွဲဖက် စားသုံးကြသည်။ ငရုတ်သီးကို မလေးရှား ဟင်းလျာများတွင် အမြဲလိုလို တွေ့ရတတ်သော်လည်း ဟင်း၏ အရသာမှာ အမြဲ စပ် နေလေ့ မရှိပေ။
မလေးရှားရှိ အဓိက သတင်းစာများအား အစိုးရနှင့် အုပ်ချုပ်နေသော ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ အတွင်းမှ ပါတီများက ပိုင်ဆိုင်ပြီး အဓိက အတိုက်အခံပါတီများမှ ပိုင်ဆိုင်သော ကိုယ်ပိုင် သတင်းစာများလည်း ရှိကာ ပုံမှန် သတင်းစာများ နှင့် ယှဉ်လျှက် ရောင်းချလေ့ ရှိသည်။ နိုင်ငံ အပိုင်း ၂ပိုင်း အတွင်း မီဒီယာတို့သည် ကွဲပြားလျှက် ရှိသည်။ ကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာ မီဒီယာများသည် အရှေ့ပိုင်းဒေသမှ သတင်းများကို နောက်ဆုံးထား ဖော်ပြလေ့ ရှိပြီး အရှေ့ပိုင်းအား ကျွန်းဆွယ်၏ ကိုလိုနီ ပမာ သဘောထား ဖော်ပြလေ့ ရှိကြသည်။ မီဒီယာများအား မလေးရှား နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကြား တင်းမာမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေသည်ဟု အပြစ်တင်ကြပြီး မလေးရှားတို့အား အင်ဒိုနီးရှားတို့ မျက်စိတွင် အကြည့်ရဆိုးအောင် ပုံဖော်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ နိုင်ငံအတွင်း မလေးဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ တမီလ်ဘာသာတို့ဖြင့် နေ့စဉ် ထုတ်ဝေသော သတင်းစာများ ရှိသည်။
သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်မှာ အကန့်အသတ် ရှိပြီး ထုတ်ဝေခွင့် နှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခွင့် ရရန်အတွက် ကန့်သတ်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အစိုးရသည် ယခင်က ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အတိုက်အခံတို့၏ သတင်းစာများကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့ဖူးသော သာဓက ရှိသည်။  ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ အေဂျင်စီမှ ပုဂ္ဂလိက ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန အားလုံးတို့အား အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များမှ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပြီး  အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ် အက်ရှင်ပါတီမှ နိုင်ငံရေး သမားများမှ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အား ရှုံ့ချကြသည်။ ဆာဘားတွင်မူ သတင်းစာ တစ်စောင်မှ လွဲ၍ ကျန်သတင်းစာ အားလုံးမှာ အစိုးရ၏ ချုပ်ထိန်းမှု အောက်မှ လွတ်ကင်းပြီး မလေးရှားတွင် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် အရှိဆုံး ဖြစ်သည်။  ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ဝေခြင်း အက်ဥပဒေ အစရှိသော ဥပဒေများမှာလည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ 
တရုတ်နှစ်ကူး အကြို မီးထွန်းထားသော အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည့် ပီနန်ရှိ ကေလောက်စီ ဘုရားကျောင်း
မလေးရှားတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အားလပ်ရက်နှင့် ပွဲတော်များ အများအပြား ရှိသည်။ အချို့နေ့များမှာ ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှ ပြန်တမ်း ထုတ်ပြန်ထားသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက်များ ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ပြည်နယ် တစ်ခုချင်းစီ၏ ရုံးပိတ်ရက်များ ဖြစ်သည်။ အခြားသော ပွဲတော်များကိုလည်း လူမျိုး သို့မဟုတ် ဘာသာ တစ်ခုချင်းစီမှ မိမိတို့အုပ်စု အလိုက် ကျင်းပလေ့ ရှိပြီး အဓိက အုပ်စုများ၏ အဓိက အားလပ်ရပ်များကို အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက် အဖြစ် ကြေငြာလေ့ ရှိသည်။ အများဆုံး ကျင်းပကြသော အားလပ်ရက်မှာ ဟာရီ မာဒေးကား ခေါ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်ပြီး ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပကြကာ မလာယာ ဖက်ဒရေးရှင်း ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရသည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၆ စက်တင်ဘာတွင် ကျင်းပသော မလေးရှားနေ့မှာ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဖက်ဒရေးရှင်းကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားမှတ်သားလောက်သော နိုင်ငံတော် အားလပ်ရက်များမှာ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အလုပ်သမားနေ့ နှင့် ဇွန်လ ပထမပတ်တွင် ကျင်းပသော ဘုရင့်မွေးနေ့တို့ ဖြစ်ကြသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ နိုင်ငံတော် ဘာသာ ဖြစ်သဖြင့် မွတ်စလင် အားလပ်ရက်များမှာ ထင်ရှားသည်။ ဟာရီ ရာယ ပွာဆာ (ဥပုသ်ထွက်သော စမိုင် အစ်နေ့) ၊ဟာရီ ရာယ ဟာဂျီ (အစ်နေ့) ၊ မော်လီဒါ ရာဆူး (တမန်တော် မွေးနေ့) နှင့် အခြားနေ့များကို ကျင်းပကြသည်။  မလေးတရုတ်လူမျိုးများသည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ကဲ့သို့သော ပွဲတော်များ နှင့် အခြား တရုတ်ရိုးရာ ယုံကြည်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပွဲတော်များကို ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။ မလေးရှားရှိ ဟိန္ဒူများမှာ ဒေဝါလီနေ့ မီးထွန်းပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲကြပြီး  တိုင်ပူဆမ်းခေါ် ဘာသာရေး အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်သော တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဘုရားဖူးများ ဘတူလှိုဏ်ဂူတွင် ပေါင်းဆုံးကြခြင်း ပွဲတော်ကိုလည်း ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ မလေးရှားရှိ ခရစ်ယာန် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အခြားနေရာများမှ ခရစ်ယာန်များ ကျင်းပသော အားလပ်ရက် ပွဲတော်များကို ဆင်နွှဲကြပြီး အထူးသဖြင့် ခရစ္စမတ် နှင့် အီစတာပွဲတော် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အရှေ့မလေးရှား တို့မှလည်း ဂါဝိုင် ဟုခေါ်သော ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲလေ့ ရှိကြသည်။ ပွဲတော် အများစုမှာ လူမျိုးစု တစ်စု သို့မဟုတ် ဘာသာတစ်ခုနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော်လည်း အားလုံးပါဝင် ဆင်နွှဲကြသည်။ "အိုးပင်းဟောက်စ်" ဟုခေါ်သော ထုံးစံအရ မလေးရှား နိုင်ငံသားတို့သည် အခြားသူတို့ ကျင်းပသောပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပြီး အမြဲ ဆိုသလိုပင် ပွဲတော်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု သိထားသော လူများ၏ အိမ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
ခေတ်သစ် အားကစားနည်းများနှင့် အတူ ရိုးရာအားကစားနည်းများ ဖြစ်ကြသော ဆီလတ် မလာယု ကဲ့သို့သော ကိုယ်ခံပညာ အားကစားနည်းများလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
မလေးရှားတွင် ရေပန်းစားသော အားကစားနည်းများမှာ ဘောလုံး၊ ကြက်တောင်၊ ကွင်းအတွင်း ကစားရသော ဟော်ကီ၊ ဘိုးလ်၊ တင်းနစ်၊ စကွက်ရှ်၊ ကိုယ်ခံပညာ၊ မြင်းစီးခြင်း၊ ရွက်တိုက်ခြင်း နှင့် စကိတ်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဘောလုံးသည် ရေပန်းအစားဆုံး အားကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မလေးရှား အနေနှင့် ၂၀၃၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား တွဲဖက် အိမ်ရှင် အဖြစ် အခြားတစ်နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲ ကျင်းပနိုင်မည့် အလားအလာကို လေ့လာလျှက် ရှိသည်။ ကြက်တောင်ရိုက် ပြိုင်ပွဲများတွင် ပရိသတ် ထောင်ဂဏန်း လာရောက်အားပေးလေ့ ရှိပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ မလေးရှားသည် သောမတ်စ် ဖလားဟုခေါ်သော ကမ္ဘာ့အဖွဲ့လိုက် အမျိုးသား ကြက်တောင်ရိုက် ဆုဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ကျင်းပသော နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံ ထဲတွင် တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။. မလေးရှား မြက်ခင်းပြင် ဘိုးလ် အဖွဲ့ချုပ်မှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။  စကွက်ရှ် ကစားနည်းကို ဗြိတိသျှ ကြည်းတပ်သားများမှ နိုင်ငံအတွင်း စတင်သယ်ဆောင်လာပြီး ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၃၉တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ မလေးရှား စကွက်ရှ် ရက်ကက် အသင်းကို ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မလေးရှားသည် အရှေ့တောင်အာရှ ဘောလုံးလိဂ် ကစားပွဲ ကျင်းပရန် အဆိုပြုထားကြသည်။မလေးရှား အမျိုးသား ကွင်းပြင် ဟော်ကီ အသင်းသည် ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ၌ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၁၃ သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ တတိယ အကြိမ်မြောက် ဟော်ကီကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကို ကွာလာလမ်ပူရှိ မာဒေးကား အားကစားကွင်းတွင် အိမ်ရှင် အဖြစ်လက်ခံ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၁၀ ကြိမ်မြောက် ဖလားကိုလည်း အလားတူ လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဖော်မြူလာဝမ်း ကားပြိုင်ပွဲ မောင်းနှင်ရာ လမ်းဖြစ်သော ဆီပန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြိုင်ကားလမ်း ရှိသည်။ ၎င်းမှာ ၁၉၂.၈၈မိုငင် (၃၁၀.၄၀၈ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားပြီး ပထမဆုံး မလေးရှာ ဂရန်းပရီ ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၉၉ တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ရိုးရာ အားကစားနည်းများတွင် ဆီလတ် မာလာယုသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်းနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ရှိ မလေးလူမျိုးများ ကစားသော ကိုယ်ခံပညာ အားကစားနည်း တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
မလာယာ အိုလံပစ်ကောင်စီ အသင်းချုပ်အား ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ် ကောင်စီမှ အသိအမှတ် ပြုခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ၁၉၅၆ ခုနှစ် မဲလ်ဘုန်းတွင် ကျင်းပသော နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား အိုလံပစ် ကောင်စီဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး မလေးရှား အနေနှင့် ကောင်စီဖွဲ့စည်းသည်မှ ယနေ့အထိ အိုလံပစ် အားကစားပွဲ တစ်ခုမှ လွဲ၍ ကျန်အိုလံပစ် အားကစား ပွဲတိုင်းတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားသမား အများဆုံး စေလွှတ်ခဲ့သည်မှာ ၅၇ ယောက် ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၃ မြူးနစ် အိုလံပစ် အားကစားပွဲသို့ ဖြစ်သည်။  မလေးရှား အားကစားသမားများ အနေနှင့် အိုလံပစ် အားကစားပွဲတွင် ဆုတံဆိပ် ၆ ခု ရရှိခဲ့ဖူးပြီး ၅ ခုမှာ ကြက်တောင် အတွက် ဖြစ်ကာ တစ်ခုမှာ ပလက်ဖောင်း ဒိုင်ဗင်ထိုး အားကစားနည်း အတွက် ဖြစ်သည်။  မလေးရှား အနေနှင့် ဓနသဟာယ အားကစားပွဲများတွင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များထဲက မလာယာ အနေနှင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ တွင် မလေးရှား အနေနှင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကွာလာလမ်ပူ၌ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။  ကစားသူ အများဆုံး ကိုယ်ခံပညာမှာ ဆီလတ် မလာယု နှင့် တိုမွိုင်ခေါ် ကစ်ဘောက်ဆင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
Room၊ Adrian (2004)။ Placenames of the World: Origins and Meanings of the Names for Over 5000 Natural Features, Countries, Capitals, Territories, Cities and Historic Sites။ McFarland & Company။ p. 221။ ISBN 978-0-7864-1814-5။
Weightman၊ Barbara A. (2011)။ Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia။ John Wiley and Sons။ p. 449။ ISBN 978-1-118-13998-1။
Tiwary၊ Shanker Shiv (2009)။ Encyclopaedia Of Southeast Asia And Its Tribes (Set Of3Vols.)။ Anmol Publications Pvt. Ltd။ p. 37။ ISBN 978-81-261-3837-1။
Singh, Kumar Suresh (2003)။ People of India။ 26။ Anthropological Survey of India။ p. 981။ ISBN 978-81-85938-98-1။
Pande, Govind Chandra (2005)။ India's Interaction with Southeast Asia: History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. 1, Part 3။ Munshiram Manoharlal။ p. 266။ ISBN 978-81-87586-24-1။
Gopal, Lallanji (2000)။ The economic life of northern India: c. A.D. 700–1200။ Motilal Banarsidass။ p. 139။ ISBN 978-81-208-0302-2။
Ahir, D. C. (1995)။ A Panorama of Indian Buddhism: Selections from the Maha Bodhi journal, 1892–1992။ Sri Satguru Publications။ p. 612။ ISBN 81-7030-462-8။
Mukerjee, Radhakamal (1984)။ The culture and art of India။ Coronet Books Inc။ p. 212။ ISBN 978-81-215-0114-9။
Sarkar, Himansu Bhusan (1970)။ Some contributions of India to the ancient civilisation of Indonesia and Malaysia။ Punthi Pustak။ p. 8။
Abdul Rashid၊ Melebek; Amat Juhari၊ Moain (2006)၊ Sejarah Bahasa Melayu ("History of the Malay Language")၊ Utusan Publications & Distributors၊ pp. 9–10၊ ISBN 967-61-1809-5
Milner၊ Anthony (2010)၊ The Malays (The Peoples of South-East Asia and the Pacific)၊ Wiley-Blackwell၊ pp. 18–19၊ ISBN 978-1-4443-3903-1
Eliot၊ Joshua; Bickersteth၊ Jane (2000)။ Sumatra Handbook။ Footprint Handbooks။ p. 262။ ISBN 1-900949-59-8။
Mohamed Anwar Omar Din (2012)။ Legitimacy of the Malays as the Sons of the Soil 80–81။ Canadian Center of Science and Education။
Reid၊ Anthony (2010)။ Imperial alchemy : nationalism and political identity in Southeast Asia။ Cambridge University Press။ p. 95။ ISBN 978-0-521-87237-9။
Bernasconi, Robert; Lott, Tommy Lee (2000)။ The Idea of Race။ Hackett Publishing။ ISBN 0-87220-458-8။
Painter, Nell Irvin (7–8 November 2003)။ Collective Degradation: Slavery and the Construction of Race (PDF)။ Proceedings of the Fifth Annual Gilder Lehrman Center International Conference at Yale University။ Yale University။ 20 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"On the Islands of the Great Ocean" (2003). The Journal of Pacific History 38 (2). doi:10.1080/0022334032000120512.
Earl, George S. W. (1850). "On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations". Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) IV.
Malay။ Encyclopaedia Britannica Inc. (2013)။
Suarez၊ Thomas (1999)။ Early Mapping of Southeast Asia။ Periplus Editions (HK) Ltd။ pp. 46–47။ ISBN 962-593-470-7။
Federation of Malaya Independence Act 1957 (c. 60)e။ The UK Statute Law Database (31 July 1957)။6November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Spaeth၊ Anthony။ "Bound for Glory"၊ Time၊9December 1996။ 20 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 March 2009။
Sakai၊ Minako (2009)။ "Reviving Malay Connections in Southeast Asia"။ in Cao၊ Elizabeth; Morrell (eds.)။ Regional Minorities and Development in Asia (PDF)။ Routledge။ p. 124။ ISBN 978-0-415-55130-4။ 13 October 2014 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
Holme, Stephanie (13 February 2012)။ Getaway to romance in Malaysia။ stuff.co.nz။6January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fix, Alan G. (June 1995). "Malayan Paleosociology: Implications for Patterns of Genetic Variation among the Orang Asli". American Anthropologist, New Series 97 (2): 313–323. doi:10.1525/aa.1995.97.2.02a00090.
Mühlhäusler၊ Peter; Tryon၊ Darrell T; Wurm၊ Stephen A (1996)။ Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia and the Americas။ Walter de Gruyer & Co။ p. 695။ ISBN 978-3-11-013417-9။
Suporno, S. (1979)။ "The Image of Majapahit in late Javanese and Indonesian Writing"။ in A. Reid and D. Marr (ed.)။ Perceptions of the Past။ Southeast Asia publications။ 4။ Singapore: Heinemann Books for the Asian Studies Association of Australia။ p. 180။
Malaysia။ United States State Department (14 July 2010)။ 14 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kent၊ Jonathan။ "Chinese diaspora: Malaysia"၊ BBC News၊3March 2005။ 21 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Luscombe၊ Stephen။ The Map Room: South East Asia: Malaya။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Encyclopædia Britannica :adictionary of arts, sciences, literature and general information။ Encyclopædia Britannica။ 17 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kuar၊ Amarjit။ International Migration and Governance in Malaysia: Policy and Performance။ University of New England။9May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gullick, J. M. (1967)။ Malaysia and Its Neighbours, The World studies series။ Taylor & Francis။ pp. 148–149။ ISBN 978-0-7100-4141-8။
Luscombe၊ Stephen။ The Map Room: South East Asia: North Borneo။ 1 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hock၊ David Koh Wee (2007)။ Legacies of World War II in South and East Asia။ Institute of Southeast Asian Studies, Singapore။ p. 48။ ISBN 978-981-230-457-5။
Mohamad, Mahathir။ "Our Region, Ourselves"၊ Time၊ 31 May 1999။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"MALAYA: Token Citizenship"၊ Time၊ 19 May 1952။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Malayan Emergency: 1948–1960။ Australian Government Department of Veteran Affairs။6July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia: Tunku Yes, Sukarno No"၊ Time၊6September 1963။ 17 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Boon Kheng Cheah (2002)။ Malaysia: The Making ofaNation။ Institute of Southeast Asian Studies။ pp. 93–။ ISBN 978-981-230-154-3။
Proclamation on Singapore။ Singapore Attorney-General။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia: The Art of Dispelling Anxiety"၊ Time၊ 27 August 1965။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Race War in Malaysia"၊ Time၊ 23 May 1969။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sundaram, Jomo Kwame (1 September 2004)။ The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia။ UNRISD။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ping, Lee Poh။ Malaysia Ten Years After The Asian Financial Crisis။ Thammasat University။ 1 April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia Information။ Federation of International Trade Associations။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Senarai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong။ Laman Web Rasmi။ 17 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia country brief။ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (February 2014)။ 22 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Background။ Parlimen Malaysia (3 June 2010)။ 25 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
John W. Langford; K. Lorne Brownsey (1988)။ The Changing Shape of Government in the Asia-Pacific Region။ IRPP။ pp. 101–။ ISBN 978-0-88645-060-1။
The management of secondary cities in southeast Asia။ United Nations Centre for Human Settlements။ 1996။ p. 120။ ISBN 92-1-131313-9။
Malaysia (Dewan Rakyat)။ Inter-Parliamentary Union (29 September 2008)။
About Najib Razak။ 1Malaysia။ 18 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Attacks on Justice – Malaysia။ International Commission of Jurists။6December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Death Penalty in Malaysia။ Government of the United Kingdom။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
England၊ Vaudine။ "Malaysian groups welcome first Islamic women judges"၊ BBC News၊9July 2010။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia rejects Christian appeal"၊ BBC News၊ 30 May 2007။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dasar Ekonomi Baru။ Pusat Maklumat Rakyat (14 November 2008)။ 21 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sundaram, Jomo Kwame (1 September 2004)။ The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia။ United Nations Research Institute for Social Development။ 22 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Perlez၊ Jane။ "Once Muslim, Now Christian and Caught in the Courts"၊ The New York Times၊ 24 August 2006။ 22 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysian state passes Islamic law"၊ BBC News၊ 8 July 2002။ 27 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
'Kelantan's passing of hudud amendments void'။ The Star (23 March 2015)။ 1 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
BN won't declare hudud support, but individual members can, chief whip says။ The Malay Mail (31 March 2015)။ 1 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Islamic Affairs (OIC) and D8 Division။ Malaysian Ministry of Foreign Affairs။9March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
List of Member States။ United Nations။ 24 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Member Economies။ Asia-Pacific Economic Cooperation။ 1 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia။ Developing 8 Countries။ 30 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Non-Aligned Movement: Member States။ Non-Aligned Movement။9December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Member States။ Commonwealth Secretariat။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia Foreign Relations။ New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (4 December 2008)။ 26 May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia's Foreign Policy။ Ministry of Foreign Affairs။ 21 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia's policy towards its 1963–2008 territorial disputes။ Academic Journals (7 September 2009)။ 17 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Diola, Camille (25 June 2014)။ Why Malaysia, unlike Philippines, keeps quiet on sea row။ The Philippine Star။ 25 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Presence of China Coast Guard ship at Luconia Shoals spooks local fishermen။ The Borneo Post (27 September 2015)။ 28 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia lodges diplomatic protest against intrusion at Beting Patinggi Ali။ Bernama။ The Rakyat Post (15 August 2015)။ 16 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia slams China's 'provocation' in South China Sea။ Reuters။ Channel News Asia (18 October 2015)။ 19 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Masli, Ubaidillah (17 March 2009)။ Brunei drops all claims to Limbang။ The Brunei Times။ 12 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mohamad, Kadir (2009). "Malaysia's territorial disputes – two cases at the ICJ : Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Ligitan and Sipadan [and the Sabah claim (Malaysia/Indonesia/Philippines)]" (PDF). Institute of Diplomacy and Foreign Relations (IDFR) Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. Retrieved on 16 May 2014. “Map of British North Borneo, highlighting in yellow colour the area covered by the Philippine claim, presented to the Court by the Philippines during the Oral Hearings at the ICJ on 25 June 2001”
Disputed – International။ CIA။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Border disputes differ for Indonesia, M'sia။ Daily Express (16 October 2015)။ 19 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia: Anti-Semitism without Jews။ Jerusalem Center for Public Affairs။5September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Peng, Lee Yuk။ "Malaysia wants Israel referred to International Criminal Court (Updated)"၊ The Star၊7June 2010။ 21 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9July 2014။
"Malaysia can be Muslim 'thought leader' – Clinton"၊ New Straits Times။ 15 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 June 2011။
Malaysia calls on Palestine and Israel to demonstrate restraint။ Bernama။ The Star (19 October 2015)။ 19 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia – Permanent Missions to the United Nations"၊ United Nations၊ 12 February 2013။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2013-10-18။
Malaysian Military statistics။ NationMaster။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Australia says major military exercise underway in Malaysia"၊ My Sinchew၊ 26 April 2010။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wood, Daniel (20 April 2014)။ Brunei, M'sia train in 11th military exercise။ The Brunei Times။5November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Joint table top exercise between armies of China, Malaysia kicks off in Malaysia"၊ Global Times၊ 22 December 2014။ 24 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Indonesia-Malaysia military exercises must continue – defence minister"၊ ANTARA News၊ 13 September 2010။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia, US armed forces in joint exercise။ The Star (25 August 2014)။ 26 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia, Philippines committed to enhancing border security"၊ My Sinchew၊9August 2010။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Piracy in Southeast Asia: Organised Criminal Syndicates or Small Scale Opportunists? (PDF)။ Gray Page (April 2013)။ 24 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Carvalho, Martin (15 May 2012)။ Malaysia, Thailand military exercise to include other agencies, Asean members။ The Star။5November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pike၊ John။ Malaysia Intensifies Border Security Following US Warnings။ GlobalSecurity.org။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kent၊ Jonathan။ "Malaysia ups Thai border security"၊ BBC News၊ 28 April 2004။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Understanding the Federation of Malaysia။ The Star (2 November 2015)။3November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia Districts။ Statoids။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia's government procurement regime။ Ministry of Finance Malaysia။ 19 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Introduction to local government in Malaysia။ Universiti Teknologi Mara။ 19 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nooi, Phang Siew (May 2008)။ Decentralisation or recentralisation? Trends in local government in Malaysia။ Commonwealth Journal of Local Governance။ 19 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Country profile:Malaysia။ Commonwealth Local Government Forum။ 26 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hai, Lim Hong။ Electoral Politics in Malaysia: 'Managing' Elections inaPlural Society။ 19 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hannum, Hurst (1993)။ Basic Documents on Autonomy and Minority Rights။ Martinus Nijhoff Publishers။ pp. 342–။ ISBN 0-7923-1977-X။
Lockard, Craig A. (March 2000). "Sabah and Sarawak: The Politics of Development and Federalism. Kajian Malaysia, Special Issue. Edited by Francis Loh Kok Wah. Penang: Universiti Sains Malaysia, 1997. Pp. 236.". Journal of Southeast Asian Studies 31 (1): 210–213. Cambridge University Press. doi:10.1017/S0022463400016192.
Bong, Karen and Pilo, Wilfred (16 September 2011)။ An agreement forged and forgotten။ The Borneo Post။3July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
James Chin (1997)။ Politics of Federal Intervention in Malaysia, with reference to Kelantan, Sarawak and Sabah 96–120။ Academia.edu။3November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mohd Hazmi Mohd Rusli (18 October 2015)။ Could the Federation of Malaysia really come apart?။ Astro Awani။3November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Will things fall apart in the Malaysian federation?။ Today Online (3 November 2015)။3November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia။ CIA။ 27 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
To Reduce Conflicts, Indonesia and Malaysia Should Meet Intensively။ Universitas Gadjah Mada။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Prescott၊ John Robert Victor; Schofield၊ Clive H (2001)။ Undelimited maritime boundaries of the Asian Rim in the Pacific Ocean။ International Boundaries Research Unit။ p. 53။ ISBN 1-897643-43-8။
Brunei။ CIA။ 13 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
World and Its Peoples: Malaysia, Philippines, Singapore, and Brunei။ Marshall Cavendish Corporation။ 2008။ pp. 1160, 1166–1192, 1218–1222။ ISBN 978-0-7614-7642-9။
Wei, Leow Cheah။ "Asia's southernmost tip"၊ Travel Times၊3July 2007။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2007-07-03။
Schuman၊ Michael။ "Waterway To the World – Summer Journey"၊ Time၊ 22 April 2009။ 16 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Saw၊ Swee-Hock (2007)။ The population of Peninsular Malaysia။ Institute of Southeast Asian Studies။ pp. 1–2။ ISBN 978-981-230-730-9။
Stevens၊ Alan M. (2004)။ Kamus Lengkap Indonesia Inggris။ Ohio University Press။ p. 89။ ISBN 979-433-387-5။
Ooi Keat Gin၊ Gin (2010)။ The A to Z of Malaysia။ Rowman & Littlefield။ p. lxxxii။ ISBN 9780810876415။ |access-date= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ)
Main Range (mountains, Malaysia)။ Encyclopædia Britannica။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Richmond၊ Simon (2010)။ Malaysia, Singapore & Brunei။ Lonely Planet။ pp. 74–75။ ISBN 978-1-74104-887-2။
Thiessen၊ Tamara (2012)။ Borneo: Sabah – Brunei – Sarawak။ Bradt Travel Guides။ p. 192။ ISBN 9781841623900။ 23 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mount Kinabalu – revered abode of the dead။ Ecology Asia။ 17 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Daw, T. (April 2004). "Reef Fish Aggregations in Sabah, East Malaysia" 5. Society for the Conservation of Reef Fish Aggregations.
List of Parties။9December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia's National Policy on Biological Diversity။ 20 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Biodiversity Theme Report။ Australian Government Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts (2001)။ 8 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Alexander၊ James (2006)။ Malaysia Brunei & Singapore။ New Holland Publishers။ pp. 46–50။ ISBN 1-86011-309-5။
Richmond၊ Simon (2007)။ Malaysia, Singapore and Brunei။ Lonely Planet။ pp. 63–64။ ISBN 1-74059-708-7။
De Young၊ Cassandra (2006)။ Review of the state of world marine capture fisheries management: Indian Ocean။ Food and Agriculture Organization of the United Nations။ p. 143။ ISBN 92-5-105499-1။
Coral Triangle။ WWF။ 14 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Saving the gardeners of the ocean"၊ Inquirer Global Nation၊ 12 July 2010။ 20 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 December 2010။
Species diversity and food-web complexity in the caves of Malaysia။ Ambient Science, 2014 Vol 1(2)။3May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Lee, S.S.; Alias, S.A.; Jones, E.B.G.; Zainuddin, N. and Chan, H.T. (2012) Checklist of Fungi of Malaysia Research Pamphlet No. 132, Ministry of Natural Resources and Environment, Malaysia.
The Malaysian Rainforest။ WWF Malaysia။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Oon၊ Helen (2008)။ Globetrotter Wildlife Guide Malaysia။ New Holland Publishers။ p. 11။ ISBN 1-84537-971-3။
Richmond၊ Simon (2010)။ Malaysia, Singapore & Brunei။ Lonely Planet။ pp. 78–82 and 366။ ISBN 978-1-74104-887-2။
McQuillan၊ Rebecca (22 November 2010)။ Can global summit save the tiger။ The Herald။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Artificial reefs to prevent illegal fishing"၊ The Borneo Post၊4December 2010။ 20 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Go: A diver's paradise"၊ New Straits Times။ 20 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 June 2011။
"Standardize illegal animal trafficking law – Ellron"၊ The Borneo Post၊ 15 December 2010။ 20 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Boulton၊ WilliaM (May 1997)။ Electronics Manufacturing in the Pacific Rim, World Technology Evaluation Center, Chapter 4: Malaysia။ The World Technology Evaluation Center, Inc။ 1 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia, A Statist Economy။ Infernalramblings။ 1 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
WEF။ 13 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia's GDP grows6percent in 2014။ 12 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Report for Selected Countries and Subjects (Malaysia)။ International Monetary Fund။ 19 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mohamad, Mahathir။ "The Way Forward"၊ Prime Minister's Office၊ 17 November 2008။
"M'sia On Track To Become High-income Nation Earlier Than Projected, Says Najib"၊ 12 May 2014။ 13 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 12 May 2014။
Platt, Eric (13 January 2012)။ These Economies Will Dominate The World In 2050။ Business Insider။ 19 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wong, Wei-Shen (7 May 2012)။ Malaysia got what it takes to be developed nation။ The Star။3July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Osman-Rani, H.; Toh, Kin Woon and Ali, Anuwar (1986)။ Effective mechanisms for the enhancement of technology and skills in Malaysia။ Institute of Southeast Asian Studies။ p. 1။ ISBN 978-9971-988-34-0။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Bożyk၊ Paweł (2006)။ "Newly Industrialized Countries"။ Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy။ Ashgate Publishing Ltd။ p. 164။ ISBN 0-7546-4638-6။
Mankiw၊ N. Gregory (2007)။ Principles of Economics (4 ed.)။ ISBN 0-324-22472-9။
Chau၊ Amy။ Minority rule, majority hate။ Asia Times။ 15 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Weidenbaum, Murray L (1996)။ The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs are CreatingaNew Economic Superpower in Asia။ Martin Kessler Books, Free Press။ pp. 4–8။ ISBN 978-0-684-82289-1။
The Security of The Straits of Malacca and Its Implications to The South East Asia Regional Security။ Office of The Prime Minister of Malaysia။ 2014-03-04 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
BNM National Summary Data Page။ Bank Negara Malaysia (30 September 2003)။6February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Schuman၊ Michael။ "How to Defeat Pirates: Success in the Strait"၊ Time၊ 22 April 2009။
TED Case Studies: Tin Mining In Malaysia – Present And Future။ American University။ 30 November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
WHO Western Pacific Region – 2006 – Malaysia – Political and socioeconomic situation။ WHO။ 29 August 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
BNM National Summary Data Page။ Bank Negara Malaysia။6February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Clover၊ Charles။ "Malaysia defends palm oil production"၊ The Telegraph၊ 10 June 2007။ 28 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Heidi၊ Munan; Yee၊ Foo Yuk (2001)။ Malaysia။ Benchmark Books။ pp. 28, 36–37။ ISBN 0-7614-1351-0။
"State investment firm keen to acquire Malaysia Airlines"၊ Malaysia Sun။ 8 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Avineshwaran, T. (8 January 2014)။ M'sia listed as 3rd best place to retire။ Jakarta Post။9January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The World's Best Retirement Havens In 2015။ The Huffington Post (2 January 2015)။5January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gooch၊ Liz။ "A Path to Financial Equality in Malaysia"၊ International Herald Tribune၊ September 2010။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pike၊ John။ Malaysia Defence Industry။ Globalsecurity.org။ 24 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
National Space Agency။ About Us – Our Organisation။ Government of Malaysia (ANGKASA)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kent၊ Jonathan။ "Malaysia has high hoped for moon"၊ BBC News၊ 28 August 2005။ 30 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysian astronaut to fly to ISS in 2007"၊ 19 May 2006။ 18 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
RM200mil for RazakSAT-2 satellite programme (9 September 2011)။3July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Why Malaysia။ Malaysia Industrial Development Authority။ 23 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Global Competitiveness Index (PDF)။ World Economic Forum။ 20 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysian Telecommunications Overview။ American University။4May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Telephones – mobile celluar။ The World Factbook။ 25 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Guidebook on Expatriate Living in Malaysia (PDF)။ Malaysia Industrial Development Authority။ May 2009။ pp. 8–9, 69။ 28 September 2011 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Infrastructure and Rural Development in Malaysia။ Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific။6June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tenaga Nasional Berhad 500kV Transmission System, Phase 1။ Ranhill Berhad။ 27 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 May 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Energy Commission။9May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Selamat, Salsuwanda and Abidin, Che Zulzikrami Azner။ Renewable Energy and Kyoto Protocol: Adoption in Malaysia။ Universiti Malaysia Perlis။4September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mody၊ Ashoka (1997)။ Infrastructure strategies in East Asia: the untold story။ The World Bank။ p. 35။ ISBN 0-8213-4027-1။
Pim, Lim How (17 October 2014)။ Fadillah says Pan Borneo Highway to be built under Ukas initiative။ The Borneo Post။ 19 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population Distribution and Basic Demographic Characteristics။ Department of Statistics, Malaysia။ 2014-05-22 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Ethnic composition)။ Department of Statistics, Malaysia (2010)။ 8 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Brant, Robin။ "Malaysia's lingering ethnic divide"၊ BBC News၊4March 2008။ 29 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gomes၊ Alberto G. (2007)။ Modernity and Malaysia: settling the Menraq forest nomads။ Taylor & Francis Group။ p. 10။ ISBN 0-203-96075-0။
"PM asked to clarify mixed-race bumiputra status"၊ The Star၊4November 2009။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2July 2014။
Kuppusamy, Baradan (24 March 2006)။ Racism alive and well in Malaysia။ Asia Times။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
West၊ Barbara A. (2009)။ Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, Volume 1။ Facts on File inc။ p. 486။ ISBN 0-8160-7109-8။
Malaysia: Citizenship laws, including methods by whichaperson may obtain citizenship; whether dual citizenship is recognized and if so, how it is acquired; process for renouncing citizenship and related documentation; grounds for revoking citizenship။ Immigration and Refugee Board of Canada (16 November 2007)။ 25 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
May, Leow Yong။ "More than justacard"၊ The Star၊ 30 August 2007။ 27 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2July 2014။
Nozawa, M.; Wing, C.; Chaiyasook, S. (2011)။ Secondary Education Regional Information Base: Country Profile – Malaysia (PDF)။ Bangkok: UNESCO။ p.4(12)။ ISBN 978-92-9223-374-7။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Mustafa၊ Shazwan။ "Malay groups want vernacular schools abolished"၊ The Malaysian Insider၊ 22 August 2010။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 August 2010။
Secondary School Education။ Malaysian Government။ 31 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Saw၊ Swee-Hock; Kesavapany၊ K. (2006)။ Malaysia: recent trends and challenges။ Institute of Southeast Asian Studies။ p. 259။ ISBN 981-230-339-1။
Malaysia – Statistics။ UNICEF။ 22 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mission, Vision & Background။ Ministry of Health Malaysia (3 July 2009)။ 17 October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hassan၊ Asan Ali Golam (2004)။ Growth, structural change, and regional inequality in Malaysia။ Ashgate Publishing Ltd။ p. 12။ ISBN 0-7546-4332-8။
Tourism Malaysia Corporate Website။ Tourism Malaysia။ 13 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vision & Goals of Kuala Lumpur။ Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur။7May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Putrajaya – Federal Administrative Capital။ Malaysian Government။ 31 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ho၊ Chin Siong (2006)။ Putrajaya – Administrative Centre of Malaysia – Planning Concept and Implementation။ 11 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Permatasari၊ Soraya။ "As Malaysia deports illegal workers, employers run short"၊ The New York Times၊ 13 July 2009။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kent၊ Jonathan။ "Illegal workers leave Malaysia"၊ BBC News၊ 29 October 2004။ 26 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Quek၊ Kim။ "Demographic implosion in Sabah? Really?"၊ Malaysiakini။ 21 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
World Refugee Survey 2009။ United States Committee for Refugees and Immigrants (17 June 2009)။ 10 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
List of cities, Malaysia (2010) (PDF)။ Department of Statistics, Malaysia။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia – Religion။ Asian Studies Center – Michigan State University။9August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Peletz, Michael G. (2002)။ Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia။ Princeton University Press။ ISBN 0-691-09508-6။
Chapter 1: Religious Affiliation။ Pew Research Center (9 August 2012)။4September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mahathir၊ Marina (17 August 2010)။ Malaysia moving forward in matters of Islam and women by Marina Mahathir။ Common Ground News Service။ 22 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malay, Standard။ Ethnologue (2009)။ 25 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mahathir regrets govt focussing too much on Bahasa။ Daily Express (2 October 2013)။ 12 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Federal Constitution။ Judicial Appointments Commission။ 24 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
National Language Act 1967 (PDF)။ Malaysian Attorney General Chambers (2006)။6August 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sulok Tawie (18 November 2015)။ Sarawak makes English official language along with BM။ The Malay Mail။ 18 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sarawak to recognise English as official language besides Bahasa Malaysia။ The Borneo Post (18 November 2015)။ 18 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sarawak adopts English as official language။ The Sun (19 November 2015)။ 19 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Andaya၊ Barbara Watson; Andaya၊ Leonard Y. (1982)။ A History of Malaysia။ MacMillan Press Ltd။ pp. 26–28, 61, 151–152, 242–243, 254–256, 274, 278။ ISBN 0-333-27672-8။
Zimmer၊ Benjamin (5 October 2006)။ Language Log: Malaysia cracks down on "salad language"။ University of Pennsylvania။ 14 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dewan Bahasa champions use of BM in ads။ New Straits Times (14 October 2013)။ 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ethnologue report for Malaysia။ Ethnologue။ 18 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ethnologue report for Malaysia (Peninsular)။ Ethnologue။ 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Adelaar၊ Alexander; Himmelmann၊ Nikolaus P. (2005)။ The Austronesian languages of Asia and Madagascar။ Taylor and Francis Group။ pp. 56, 397။ ISBN 0-7007-1286-0။
"Malaysian Creole Portuguese: Asian, African or European?" (1975). Anthropological Linguistics 17 (5): 211–236. University of Texas.
Michaelis၊ Susanne (2008)။ Roots of Creole structures။ John Benjamins Publishing Co။ p. 279။ ISBN 978-90-272-5255-5။
Raghavan, R. (1977). "Ethno-racial marginality in West Malaysia: The case of the Peranakan Hindu Melaka or Malaccan Chitty community". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 133 (4): 438–458. Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. doi:10.1163/22134379-90002605. Retrieved on7October 2010.
Cultural Tourism Promotion and policy in Malaysia။ School of Housing, Building and Planning (22 October 1992)။6November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Van der Heide၊ William (2002)။ Malaysian cinema, Asian film: border crossings and national cultures။ Amsterdam University Press။ pp. 98–99။ ISBN 90-5356-580-9။
Schonhardt၊ Sara (3 October 2009)။ Indonesia cut fromadifferent cloth။ Asia Times။6November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Indonesia, Malaysia agree to cool tension on cultural heritage dispute။ People Daily (17 September 2009)။6November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dunford, George (2006)။ Southeast Asia onaShoestring။ Lonely Planet။ pp. 419–။ ISBN 978-1-74104-444-7။
Miller၊ Terry E.; Williams၊ Sean (2008)။ The Garland handbook of Southeast Asian music။ Taylor and Francis Group။ pp. 223–224။ ISBN 0-203-93144-0။
Gateway to Malay culture။ Asiapac Books Ptd Ltd။ 2003။ p. 110။ ISBN 981-229-326-4။
Matusky, Patricia Ann; Tan, Sooi Beng (2004)။ The Music of Malaysia: The Classical, Folk, and Syncretic Traditions။ Ashgate Publishing Ltd။ pp. 177–187။ ISBN 978-0-7546-0831-8။
Osman, Mohd Taib။ Languages and Literature။ The Encyclopedia of Malaysia။6January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Lipton urges Malaysians to take pride in teh tarik, our national beverage။ New Sabah Times (7 September 2012)။2July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Rules, Dwayne A. (7 April 2011)။ Nasi lemak, our 'national dish'။ The Star။2July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Eckhardt၊ Robyn (1 June 2008)။ Kuala Lumpur Melaka & Penang။ Lonely Planet။ p. 42။ ISBN 978-1-74104-485-0။
Jarvis၊ Alice-Azania။ "Far Eastern cuisine: FancyaMalaysian? – Features, Food & Drink"၊ The Independent၊ 13 October 2010။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wu၊ David Y. H.; Tan၊ Chee Beng (2001)။ Changing Chinese foodways in Asia။ The Chinese University of Hong Kong။ p. 128။ ISBN 962-201-914-5။
Ahmad၊ Razak။ "Malaysian media shapes battleground in Anwar trial"၊5February 2010။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysian opposition media banned"၊ BBC News၊ 23 March 2009။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The East-West divide of Malaysian media"၊ Malaysian Mirror၊9September 2010။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 July 2011။
"Comment: Anwar blames Malaysian media"၊ The Jakarta Post၊ 28 September 2010။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia။ Freedom House (2013)။ 30 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Opposition muzzled – here's black and white proof"၊ Malaysiakini၊ 29 June 2007။
Vikneswary၊ G။ "TV station denies censoring opposition news"၊ Malaysiakini၊ 28 June 2007။
McAdams၊ Mindy။ How Press Censorship Works။ Mindy McAdams။ 30 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Chun, Yeng Ai။ "Malaysia Day nowapublic holiday, says PM"၊ 19 October 2009။7May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2July 2014။
Batu Caves, Selangor။ Tourism Malaysia။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hutton၊ Wendy (1997)။ East Malaysia and Brunei။ Periplus Editions (HK) Ltd။ p. 169။ ISBN 962-593-180-5။
Assunta, Mary (2006)။ BAT flouts tobacco-free World Cup policy။ University of Sydney, New South Wales, Australia။ Tobacco Control။ DOI:10.1136/tc.11.3.277။3October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Asean to bid for 2034 FIFA World Cup။ The Brunei Times (16 May 2013)။2July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
History of Badminton။ SportsKnowHow.com။ 11 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malaysia Lawn Bowls Federation။ 88DB.com။7July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nauright, John; Parrish, Charles (2012)။ Sports Around the World: History, Culture, and Practice။ ABC-CLIO။ pp. 250–။ ISBN 978-1-59884-300-2။
History of SRAM။ Squash Racquets Association of Malaysia။ 15 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Malaysia, Indonesia propose Southeast Asia football league"၊ The Malaysian Insider၊ 31 July 2010။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3August 2010။
FIH Men's World Rankings –7December 2015 (PDF)။ International Hockey Federation (7 December 2015)။ 20 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"History of Hockey World Cup"၊ The Times of India၊ 27 February 2010။ 1 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Novikov၊ Andrew။ Formula One Grand Prix Circuits။ All Formula One Info။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Minahan, James B. (30 August 2012)။ Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia: An Encyclopedia။ ABC-CLIO။ pp. 76–။ ISBN 978-1-59884-660-7။
Olympic Games – History။ The Olympic Council of Malaysia။ 2013-08-07 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Previous Olympic Games Medal Tally။ Olympic Council of Malaysia။ 2013-08-07 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dudley, Rueben (13 September 2010)။ Doing Malaysia proud။ The Sun။ 15 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Commonwealth Games Federation, History and Tradition of Commonwealth Games, Edinburgh, Bendigo, Pune။ Commonwealth Youth Games 2008 (14 August 2000)။ 8 October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။